inn yar lane by Sai KaungSan - issuu
အင်းယားလမ်းက ချစ်ဇာတ်လမ်း အသက် (၁၈) နှစ်အောက် ကလေးများ မဖတ်ရ/မ၀င်ရ ... မင်္ဂလာပါ ... စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ်များ ခင်ဗျာ ... အချစ် ... အချစ် ... လူတိုင်းပြောကြတဲ့အချစ် ... အရွယ်ရောက်တဲ့ လူတိုင်း ... ကြုံတွေ့ ခံစားရတဲ့အချစ် ...
မာနတွေ ... ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ... မပါတဲ့ ... ရိုးရိုးလေး မြတ်မြတ်နိုးနိုး ... ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ... နှစ်ကိုယ်ကြား ... ချစ်တေးသီပုံလေးကို ... စကားလုံးများ ... ရိုးရိုး လေး စီကာကုံးလို့ ... စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ်ကို ... ရင်သိမ့်တုန် ... ချစ်ခြင်းများ မွေးဖွားလာအောင် ... တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ...
ချစ်ဖူးသူတိုင်း ... ချစ်ဦး သူနဲ့ ညားကြပါစေ ... လို့ ... အမြဲဆုတောင်းလျက် ... မောင်ဟိတ်
ဤဇာတ်လမ်းကို (၂၇) ရက်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၁ တွင် မြန်မာဆိုက်ဘာမီဒီယာ (http://mmcybermedia.com) တွင် ပထမဦးဆုံး စတင် တင်ဆက်ပါသည်။
ဤဇာတ်လမ်းကို (၂၃) ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၁ တွင် အချစ်တက္ကသိုလ် (http://achittatkatho.net) တွင် စတင် တင်ဆက်ပါသည်။ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ... မောင် ... နဲ့ ကျွန်မ ... စတွေ့တာ ... ဒီအင်းယားလမ်းမှာပေါ့ ... UFL ကျောင်းမှာ ညနေပိုင်း ... အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ဖို့ သွားတိုင်း ... နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်လာတဲ့ ... ခပ်တောင့်တောင့် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ... အစကတော့ သတိမထားမိပါဘူး ... သုံးလေးရက်လောက်နေတော့ သတိထားမိတာပါ ... ကျွန်မအိမ်က ... ကန်လမ်းထဲမှာဆိုတော့ ... UFL ကျောင်းကို ... ဘက်စ်ကားစီးရမှာလည်း အဆင်မပြေဘူးလေ ... စီးလည်း မစီးချင်ဘူး ... လူတွေ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာမျိုးကို ... ကျွန်မ မကြိုက်ဘူးရှင့် ...
သုံးလေးရက်လောက် ... နောက်ကနေလိုက်လာပြီး ... ဘာမှလည်း မပြောတော့ ... နည်းနည်းတော့ ခံရခက်တာပေါ့ ... ဒီနေ့လည်းကြည်အုံ့း ... ကန်ဘောင်ကနေ ... ဒီဘက်လျှောက်လာတော့ ... သူ ... လိုက်လာတယ်ဆိုတာ ... လှည့်မကြည့်ပေမယ့်
သိနေပါတယ် ... မြန်မာဆန်ဆန်လေး ... ရင်စေ့အင်္ကျီ ... ပါတိတ်ထမီအနီရောင်လေးက ... ကျွန်မ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ... လှစေတာ သိတာပေါ့ ... ဒေါက်တွေပါတဲ့ ... ပါတိတ်လေးကလည်း ... တင်းတင်းရင်းရင်း ... ဖွံ့ကားနေတဲ့ ... တင်အလှကို ဖော်ပြနေမှာပဲ ..... ဒေါက်ဖိနပ် နည်းနည်းမြင့်တာလေးကလည်း ... တင်လေးကို ... ပိုပင့်ထားသလိုဖြစ်ပြီး ... ကားတက်နေတဲ့ ...
ကျွန်မနောက်ပိုင်း အလှကို ... ကြည့်ပြီး ... ခပ်စိုက်စိုက်နောက်ကနေ လိုက်လာတော့ ... နည်းနည်းတော့ ရင်တုန်မိတာပေါ့နော် ... လူဆိုးလေးလား ... နှာဘူးလေးလား ... တစ်ခုခုပဲ ... ကျွန်မနောက်က တစ်ယောက်ယောက် ... ဒီလိုမျိုးလိုက်ကြည့်နေရင် ...
ဆက်မလျှောက်တတ်တော့ဘူးရှင့် ... ရင်ထဲမှာ ... တစ်မျိုးချည်းပဲရှင် ... ကြောက်တာလား ... ရွံ့တာလား ပြောတတ်ပါဘူး ... ဒီလိုမျိုးအကြည့်ခံရရင် ... ဟိုပေါင်ကြားက ... ခဏခဏ ... ညှစ်ညှစ်မိတတ်ပါတယ် ... ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ...
အတင်းလိမ်လျှောက်သလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ် ... ခက်တော့တာပဲ ... ဖိုင်တွဲလေးကို ... ရင်မှာပိုက်ပြီး ... ခပ်သွက်သွက်
လျှောက်လာမိတယ် ... သူလည်း သွက်သွက်လိုက်လာတယ် ... အတင်းချည်းပါလား ... ဒီလိုမျိုး နောက်ကလိုက်နေရင် ... မကောင်းဘူးရှင့် ... အင်းယားလမ်း မီးပွိုင့်နားရောက်တော့ ... ကျွန်မ ရပ်လိုက်တယ် ... ကောင်လေးက ... ကျွန်မနားလာရပ်တယ် ... ကောင်လေးပုံစံက ... မျက်ခုံးကောင်းကောင်း ... ဗလတောင့်တောင့််လေးပါပဲ ... တီရှပ်နဲ့ ... ဂျင်းဘောင်းဘီလေး ၀တ်ထားတဲ့ဟန်က ... ယောက်ျားပီသပါတယ် ... သူ့ပုံစံက ... ရည်ရည်မွန်မွန်ပါပဲ ... "မင်း ... ဘာလို့ ငါ့နောက်ကို ... တစ်ကောက်ကောက်လိုက်နေတာလဲဟင်" "ချစ်လို့" "ဘာ"
"မမက ... အရမ်းလှတာကိုး ... ကျွန်တော့်နာမည် ... ဟိန်းထက်ပါ ... မမ နာမည်က ... လှမျိုးသွယ် ... အသက်က ၂၇ ... ကန်လမ်းက တိုက်ခန်းမှာ တစ်ယောက်ထဲနေတယ် ... " အောင်မြတ်လေးရှင် ... ကျွန်မကြောင်းကို ... ဘယ်အချိန်က စုံစမ်းထားလဲ မသိပါဘူး ... နည်းနည်း ရင်တွေတောင် ခုန်သွားတယ် ... တွေ့တာနဲ့ ချစ်လို့တဲ့ ... အတင်းပဲ ... အစလေးတောင် မပျိုးဘူး ... ဒီလိုအထာမျိုးနဲ့တော့ ... မစနဲ့လေ ... ကျွန်မအချစ်က ... ဒီလောက် မပေါဘူး ... "ကျွန်မကတော့ ... မချစ်နိုင်ဘူးရှင့် ... ဆက်မလိုက်နဲ့တော့နော် ... ချာတိတ်" ကျွန်မ ... ခပ်တင်းတင်း ပြောပစ်လိုက်တယ် ... "ချာတိတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ... ၂၄ နှစ်ရောက်နေပါပြီ ... မမကို ... တကယ်ချစ်တာပါဗျာ ... တစ်သက်လုံး မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ... မမကို ... ချစ်ပါ့မယ် ... ကျွန်တော့် အချစ်ကို ... လက်ခံပေးပါလားဗျာ"
ချာတိတ် ... ပြောလည်းပြီးရော ... ဒူးထောက်ပြီး ... လက်ထဲက နှင်းဆီပန်းလေးကို ... ကျွန်မ လက်ထဲ ကမ်းပေးနေတယ် ... ရှက်လိုက်တာရှင် ... ရှက်လိုက်တာ ... ဖြန်းကနဲ ရှက်သွားပေမယ့် ... ရင်တော့ တအားခုန်သွားတယ်ရှင့် ... သူ့လုပ်ရပ်က ... တော်ရုံကောင်မလေးဆို ... ကြွေသွားမှာပဲရှင် ... အင်းယားလမ်း မီးပွိုင့်ဆိုတာ ... ကားတွေ မများပေမယ့် ...
ဖြတ်သွားဖြတ်လာတော့ ရှိတာပဲ ... မီးပွိုင့်မှာ ... ဒူးထောက်ရဲတာကို ... စိတ်မှာ အမှတ်အပြည့်ပေးပစ်လိုက်တယ် ... ဟောကြည့် ... ကားပေါ်ကနေ လှမ်းအော်သွားတယ် ...
"ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်ဟေ့ ... မင်းသမီး ... ယူလိုက်လေ ... မြန်မြန်ယူလိုက် ... မင်းသား ... ဒူးတွေ ညောင်းနေပြီ" ရှက်လိုက်တာရှင် ... ကျွန်မမျက်နှာ ... အရှက်ကြောင့် ... ရဲရဲနီသွားမှာပဲ ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် ... ဒီလူဆိုးလေးကို ... ခက်တော့တာပဲ ... မယူပြန်ရင်လည်း ... အတင်းနောက်ကလိုက်လာအုံးမယ် ... ယူပြန်တော့လည်း ... သူ့ကို ချစ်လို့ ဖြစ်အုံးမယ် ... အို ... မဖြစ်သေးပါဘူး ...
"မင်းက တကယ်ချစ်တာလား" "ဟုတ်ကဲ့"
"ဟုတ်ပြီ ... အတည်ဆိုရင် ... ငါ စဉ်းစားပေးမယ် ... ထတော့" "တကယ်စဉ်းစားပေးမှာလား ... မမ"
"အင်း ... တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ... ငါပြောတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ... မင်းလိုက်နာရမယ်" "ဘာစည်းတွေလဲဟင်" "၁. အခုထ"
"ဟုတ် ... ထပြီ" "၂. ငါ့နောက်ကို ... အနည်းဆုံး ... ဆယ်ပေအကွာကနေ လိုက်ရမယ်" "ဗျာ"
"မလုပ်ချင်လည်းရတယ်လေ ... မစဉ်းစားယုံပေါ့" "လုပ်မယ်ဗျာ ... စိတ်ချ"
"၃. ငါတက်တဲ့ ကျောင်းထဲ မလာရဘူး ... ငါ နေတဲ့လမ်းထဲ ... မလာရဘူး ..." "၄. ဒီလိုမျိုး အကြပ်မကိုင်ရဘူး ... အတင်းစကား လိုက်မပြောရဘူး" "ဟင်း ... ဒါပဲလားဗျာ"
"အင်း ... ဒါပဲ ... မစဉ်းစားရသေးတဲ့ စည်းကမ်းတွေ ရှိသေးတယ် ... အဲဒါတွေကိုလည်း ... လိုက်နာရမယ်" "ဘယ်အချိန်ထိ လိုက်နာရမှာဟင် ... မမ ... ဘယ်တော့ အဖြေပေးမှာလဲ"
"မင်းရဲ့ အပြုအမူပေါ်မူတည်ပြီး ... စည်းကမ်းလျော့တာ တိုးတာ ... ဖြစ်လာမယ် ... အဖြေပေးဖို့ကတော့ ... စောပါသေးတယ် ... မင်း ... တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ... သုံးနှစ် ... စောင့်ရမယ်" "ဗျာ ... သုံးနှစ်တောင်"
"မစောင့်ချင်လည်း ... ဂိုးတော့" ကျွန်မ ... ခပ်တည်တည်နဲ့ ... ကျောင်းဘက်လျှောက်လာတယ် ... ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်နေတယ် ... နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကို ... မနည်းထိန်းပြီး ... ခပ်သွက်သွက် လျှောက်လာခဲ့တယ် ... ချာတိတ်ကို ... ဒီလိုမှ
မကိုင်တွယ်ရင် ... နောက်ပိုင်းပိုဆိုးလိမ့်မယ် ... ကောင်လေးကြည့်ရတာ ... တဇွတ်ထိုးတော့နိုင်တယ် ... လမ်းလယ်ကောင်မှာ ... ဒူးထောက်ပြီး ပန်းပေးတာ ... ဘယ်လိုသတ္တိများပါလိမ့် ... သိပ်ပေါတာလား ... သိပ်ချစ်လို့လား ... သိပ်ချစ်လို့နေမှာပါ ... အို ... ငါ ဘာလို့ ... မဆွတ်ခင်က ညွှတ်ချင်နေတာလဲ ... သူ့ဘက်က ... တွေးပေးနေတာလဲ ... နာမည်က ... ဟိန်းထက်တဲ့ ...
သူ့မျက်ဝန်း စူးစူးက ... မျက်စိထဲက ဖျောက်လို့မရဘူးရှင့် ... စာသင်ခန်းထဲ ရောက်တော့ ... အတွေးတွေက ... တ၀ဲလည်လည်နဲ့ ... ခုနက အဖြစ်ကို ... စိတ်ထဲစွဲနေတယ်ရှင့် ... ကျွန်မကို ... ချစ်လို့ပါ ... ကြိုက်လို့ပါ ... စာလိုက်ပေးကြ ...
စကားလိုက်ပေးကြတယ်ဆိုပေမယ့် ... တခါမှ ရင်မခုန်ဘူးပါဘူး ... စိတ်လဲမ၀င်စားဘူး ... ဒီချာတိတ်အလှည့်ကျမှ ...
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟင် ... ၂၇ နှစ်လုံး ထိန်းထားတဲ့ ... မိန်းမသိက္ခာတွေ အရည်ပျော်ကုန်ပြီလား ... မဟုတ်သေးပါဘူး ... ငါဘာလို့ ... သူ့ကို စည်းကမ်းတွေ ထုတ်ခဲ့တာလဲ ... ဘာလို့ သုံးနှစ်စောင့်ခိုင်းတာလဲ ... တခြား ယောက်ျားလေးတွေ ...
လာပြောတိုင်း ... ကန်တော့ဆွမ်းပါရှင်လို့ ... ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောပစ်ခဲ့တဲ့ ... ကျွန်မ ... သူနဲ့ ကျမှ ... ဇာတ်လမ်းဆက်ဖို့ ... ပြောခဲ့တာလဲ ... သူ့ကိုများ ... ကျွန်မ ... ချစ်မိနေပြီလားရှင် ... သင်တန်းပြီးချိန်က ၈း၀၀ ... မှောင်နေပြီ ... ဟိုဟိုဒဒီလိုက်ကြည့်တော့ ... သူ့ကို မတွေ့ရ ... ကျောင်းထဲမှာ မတွေ့ရ ... ကျောင်းရှေ့မှာလည်း မရှိ ... သုံးနှစ်စောင့်ခိုင်းလို့ ... မလာတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ ... စိတ်ထဲ နဲနဲ ၀မ်းနည်းသွားသည်
...ယောက်ျားတွေက ဒီလိုပါပဲလေ ... လိုချင်တာ မရတော့ ... စိတ်ညစ်ပြီး ခွာသွားမှာပေါ့ ... ကျွန်မကလည်း ... အချစ်ကို
လွယ်လွယ်ကူကူ ... မပေးနိုင်ဘူးရှင့် ... ဟော ... ကိုယ်တော်ချောက ... မီးပွိုင့်မှာ စောင့်နေတာကိုး ... ရင်ထဲမှာ ... ဒိန်းကနဲ ၀မ်းသားသွားပါတယ် ... အင်း ... သူက စောင့်နေရှာသားပဲ ... တစ်မှတ် ... အနားရောက်တော့ ... ကျွန်မကို ... ပြုံးပြတယ် ... "မမ ... တစ်ခုတော့ လက်ခံပါဗျာ" "ဘာလဲ"
"မမ ... စားဖို့ ... ဒိုးနပ် မုန့်လေးပါ ... မမက စတော်ဘယ်ရီ ဒိုးနတ် ကြိုက်တယ်မှတ်လား" အိုး ... ကျွန်မ ... စတော်ဘယ်ရီ ဒိုးနတ် ကြိုက်တာ ဘယ်လိုသိတာလဲဟင် ... သူ့လက်ထဲက ... မုန့်ထုပ်လေးကို ...
ယူရင်ကောင်းမလား မယူရင်ကောင်းမလား ... အိုး ... မယူပါဘူး ... တစိမ်းယောက်ျားလေးဆီက ... ပစ္စည်းတွေလက်ခံမိရင် ... နောက်ပိုင်းအားနာရလိမ့်မယ် ... ပြတ်ပြတ်သားသားမယူတာပဲ ကောင်းတယ် ... "ငါက ... သူများပေးတဲ့ မုန့်ကို ... မယူတတ်ဘူး ... မစားတတ်ဘူး" "ဗျာ"
"စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် မမ ... မယူချင်လည်း မယူပါနဲ့ ... နောက်ကနေ ... ဆယ်ပေအကွာက လိုက်ခဲ့မယ်ဗျာ ..." ကျွန်မ ... ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး ... ခပ်တည်တည်နဲ့ ... ဒီအတိုင်း ဆက်လျှောက်လာတယ် ... သူကလည်း ... နောက်ကနေ ... လိုက်လာတယ် ... ဆယ်ပေအကွာကပေါ့ ... သူက တကယ်ချစ်တာလား ... အစမို့လို့ နာခံနေတာလား ... နောက်နေ့ကော စောင့်နေမှာလား ... အို ... သူ နောက်ကနေ လိုက်လာတော့ ... ငါ့နောက်ပိုင်းကိုကြည့်နေမှာပေါ့ ... ညဘက်ဆိုတော့ ...
အလင်းရောင်က အားမကောင်းဘူးလေ ... ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရမယ် မထင်ပါဘူး ... နည်းနည်းတော့ လန့်တာပေါ့နော် ... ခပ်သွက်သွက်လျှောက်တော့ ... နောက်က တင်တွေက ... ထိန်းမရအောင် ... ယမ်းခါနေမလားဟင် ... ဖြစ်ချင်တော့ ... ပန်းခြံနားရောက်တော့ ... ဖိနပ်လေးက ပြတ်သွားတယ် ... ဟောတော့ ... သုံးလေးရက်လောက်ပဲ စီးရသေးတဲ့ ... ဖိနပ်အသစ်လေးက ... ပျက်သွားပြီ ... စိတ်ညစ်လိုက်တာရှင် ... ရှက်လိုက်တာ ... နောက်ကနေ ရီးစားစကားလိုက်ပြောနေတဲ့ကြားက ... ဖိနပ်က ပြတ်သွားရတယ်လို့ ... ဟင့် ...
ဖိနပ်သွားတော့ ... ဆက်လျှောက်လို့မရတော့လေ ... အောက်နှုတ်ခမ်းကို ဖိကိုက်ထားရင်း ... ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ... ကျွန်မနားကို ... သူရောက်လာပါတယ် ... "မ ... ဘာဖြစ်တာလဲဟင် ... ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ" ကျွန်မ ... သူ့ကို ... အကူအညီမတောင်းချင်ပါဘူး ... ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ... ရှက်နေမိပါတယ် ... ဖိနပ်ပျက်သွားတယ်ဆိုတာ ... သူ့ကိုလည်း မသိစေချင်ဘူး ... သူက နည်းနည်းလျင်တယ် ...
"မ ... ဖိနပ်ပြတ်သွားတာ မဟုတ်လား ... ပေးပေး ... ကျွန်တော် လုပ်တတ်တယ်" "အို ... မလုပ်ပါနဲ့" တားဖို့တောင် အချိန်မမှီတော့ပါဘူးရှင် ... သူ ... ကျွန်မဘေးမှာ ... ထိုင်ပြီး ... စီးလာတဲ့ ဖိနပ်ကို ... အတင်းချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် ... ကျွန်မလည်း ရှက်လွန်းလို့ ... သူလုပ်သမျှ ... မငြင်းဆန်နိုင်ေတာ့ပါဘူး ... အသာအယာပဲ ချွတ်ပေးလိုက်မိပါတယ်ရှင် ... သူ
ကျွန်မ ခြေဖ၀ါးကို ... လာကိုင်တော့ ... တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထသွားပါတယ် ... ကျွန်မက ... ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ... တန်ဖိုးထားပါတယ် ... တစိမ်းယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ပရောပရီနေဖို့မပြောပါနဲ့ ... ကိုယ်လုံးချင်းတောင် မထိဖို့ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းသိမ်းထားပါတယ် ... လူ့လောက အလယ်မှာ ... တစ်ကောင်ကြွက် ကျွန်မက ... ကိုယ့်ကိုကိုယ် မထိန်းသိမ်းရင် ...
စုတ်ပြတ်သွားမှာပေါ့ ... ကျွန်မခြေထောက်ကို ... ပထမဆုံးလာကိုင်တဲ့ ... မောင့်ကို ... ကျွန်မ အရမ်းသဘောကျသွားပါတယ်ရှင် ... အားနာခြင်း၊ ရှက်ရွံ့ခြင်းနောက်မှာ ... ကြည်နူးခြင်း ... ၀မ်းသာခြင်း ... များနဲ့ ... ကျွန်မရင်တွေ လှိုက်ဖိုနေမိပါတယ်ရှင် ... ကြွေသွားပြီ မောင်ရယ် ... ကြွေသွားပြီ ... ကျွန်မ သဘောကျလွန်းလို့ ... ကြည်ကြည်နူးနူး ပြုံးမိပါတယ် ...
ယောက်ျားတစ်ယောက်က ... မာနတရားတွေ မရှိပဲ ... ပြတ်သွားတဲ့ ... ကျွန်မ ဖိနပ်လေးကို ... ပင်အပ်လေးနဲ့ ... ထိုးပေးနေတာ ... ကြည်နူးလိုက်တာရှင် ... ဒီလိုမျိုး အပြုအမူလေးက ... မောင့်ကို ... ကျွန်မ စချစ်သွားတယ်ဆိုရင် ... မမှားပါဘူး ...
မာနတရားတွေ မပါတဲ့ ... အချစ်ကို ... လက်ခံသင့်ပါတယ်လေ ... ချက်ချင်းတော့ အဖြေပေးချင်သေးဘူး ... ကျွန်မ အချစ်တွေကို ...မောင် အထင်သေးသွားမယ် လို့ ထင်တယ်နော် ... နောက်ပြီး ... ကျွန်မ အရမ်းရှက်တယ်ရှင့် ... မောင့်ကို ကျွန်မ ...
ချစ်ပါတယ်လို့ ပြောရမှာကို ... ပြောမထွက်ဘူး ... တစ်ခါမှ မချစ်ဘူးတော့လည်း ... နှုတ်မရဲတာလည်း ဖြစ်မှာပေါ့နော် ...
ကျေးဇူးတော့တင်ပါတယ် ... ကျွန်မလည်း ... မနေတတ်တာနဲ့ ... သူ့ဘေးမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ... သူလုပ်နေတာ လိုက်ကြည့်နေမိပါတယ် ... ပင်အပ်လေးနဲ့ ... ကျွန်မဖိနပ်ကြိုးလေးကို ... သေချာ ထိုးပေးပြီး ... ကျွန်မခြေထောက်မှာ ပြန်စွပ်ပေးပါတယ် ... အားနာလိုက်တာရှင် ... ကျွန်မကို အောက်ကနေ မော့ကြည့်ပြီး "မ ... စီးကြည့်ပါအုံး ... ရသွားပြီ" "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်"
"မ ... ကို ကူညီခွင့်ရတာပဲ ... ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ ... တစ်သက်လုံး ... အနားမှာ နေခွင့်ပေးရင် ... သိပ်ကောင်းမှာပဲ" နေခွင့်ပေးမှာပေါ့ ... မောင်ရယ် ... နေခွင့်ပေးမှာပေါ့ ... အခုမှ စတွေ့တော့ ... စောပါသေးတယ် ... နောက်မှပေါ့ ... အို ... ဘာတွေ လျှောက်တွေးနေတာလဲ မသိပါဘူး ...လမ်းစလျှောက်တော့ သူက အတူတူ လိုက်ရမလို ... နောက်ကနေခွာလျှောက်ရမလို ဖြစ်နေတယ် ... မ၀ံ့မရဲနဲ့ ... "မ ... နဲ့ အတူတူ လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်မှတ်လားဟင်" "အင်း ... ရပါတယ်" မလိုက်နဲ့လို့ ပြောရမှာ ... ပါးစပ်က ... လွှတ်ကနဲထွက်သွားတယ် ... မတတ်နိုင်တော့ ... နံပါတ် ၂ စည်းမျဉ်း ပျက်သွားပြီ ...
အတူတူလမ်းလျှောက်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်လေ ... ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ ... သူနဲ့ အင်းယားလမ်းကို ... လျှောက်ကြည့်ချင်ပါတယ် ... သူ့အရပ်က ... ကျွန်မ ထက်ရှည်ပါတယ် ... ကျွန်မက ၅ ပေ ၆ လက်မ ... ကျွန်မထက် ... ခေါင်းတစ်လုံးလောက် ပိုမြင့်တော့ ... ၆ ပေလောက်ရှိမယ် ထင်ပါရဲ့ ...
"ဟိန်းထက်က ... ဘယ်မှာနေတာလဲဟင်" "ကျွန်တော်က ... လှည်းတန်းက ... အဆောင်တစ်ခုမှာ နေပါတယ် ... မ ... ဖေဖေက ကျွန်တော် ... ငယ်ငယ်တည်းက
ဆုံးသွားတယ် ... မေမေကတော့ မနှစ်က ဆုံးရှာတယ် ... မွေးချင်းတွေလည်း မရှိတော့ ... မန္တလေးမှာ မနေချင်တာနဲ့ ... ရန်ကုန်ဆင်းလာတာ ... အလုပ်ကတော့ ... ကော်ဖီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပရ်မယ်ထင်တာပဲ ... အလုပ်ရမရ မသိရသေးပါဘူး ... မ"
"ဟိန်းထက်က ... တို့ကို ... ဘယ်လို သိတာလဲဟင်"
"မ ... ကိုလား ... ဟိုနေ့က ကန်လမ်းထိပ်မှာ တွေ့မိတာပါ ... စစ တွေ့တုန်းက ... မ က ... သိပ်လှလို့ ... အရမ်းရင်ခုန်သွားတယ်ဗျာ ... အရမ်းချစ်သွားတယ်ဗျာ ... သိပ်ချစ်လွန်းလို့ ... မ က ... ဘယ်သူလဲ ... ဘယ်မှာနေတာလဲ ... လိုက်စုံစမ်းတာပေါ့"
"တို့က ... လှလို့ ... မင်းက စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့"
"လှလို့ဆိုတာထက် ... အိနြေ္ဒရှိရှိ ... ရိုးရိုး ယဉ်ယဉ်လေးကို ... ပိုချစ်တယ်ဆိုတာ မှန်လိမ့်မယ် ထင်တယ် ... မရဲ့" "အပြောကတော့ ... ကြွေလောက်တယ်နော် ... ဟိတ် ... ရီးစား ဘယ်နှယောက်ထားပြီးပြီလဲ"
"ဘုရားပေးပေး ... ကျမ်းပေးပေးပါဗျာ ... တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူးဗျာ ... ထားလည်း မထားဖူးပါဘူး" "ညစာကော ... စားပြီးပြီလားဟင်"
"မစားရသေးဘူးဗျ ... မ ... ၀ယ်ကျွေးမလို့လား" "အင်း ... ဖိနပ်ပြတ်သွားတာကို .. ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့"
"ရပါတယ်ဗျာ ... မ က ... တစ်သက်လုံး ... ညစာကျွေးလည်း ... စိတ်မဆိုးပါဘူး" "ဟိန်းထက်နော်" စကားကလည်း တတ်ပ့ါ ... တသက်လုံး ညစာကျွေးရမယ်တဲ့ ... ဟွန့် ... နည်းနည်းတော့ ... လွန်တာပေါ့ မောင်ရယ် ... ကျွန်မ မျက်စောင်းလေး ထိုးလိုက်မိပါတယ် ... ကျွန်မတို့ နှစ်ေယာက် စကားတပြောပြောနဲ့ ... ကန်လမ်းထိပ်က ... ကော်ဖီဆိုင်မှာ ...
ထမင်းစားကြပါတယ် ... ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ... ညစာအတူတူမစားဖူးတော့ ... ဖိန်းကနဲ ... ရှိန်းကနဲ ခဏခဏ ... ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ် ... နည်းနည်းတော့ ရှက်မိပေမယ့် ... အပြောကောင်းတဲ့ ... မောင့်လေထဲမှာ ... မျောနေမိပြီး ... မျက်ဝန်းချင်း ဆုံမိတာ ... ခဏခဏပါပဲ ... မောင်က ကြင်နာတတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါပဲ ... ထမင်းအတူတူစားတော့ ... ကျွန်မကို ... ဟင်းလေးတွေ ခပ်ထည့်ပေးလိုက် ... ရေငှဲ့ပေးလိုက်နဲ့ ... ဟန်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပဲ ... ချစ်လို့ လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာ ... ကျွန်မခံစားမိပါတယ် ... ထမင်းစားပြီးတော့ ... ည ၁၀ နာရီ ထိုးခါနီးပြီ ... "ညစာကျွေးတဲ့အတွက် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" "အိမ်မက်လှလှမက်ပါစေရှင်"
"အိမ်အောက်ထိ လိုက်ပို့လို့ရလားဟင်" "ဟင့်အင်းနော် ... လမ်းကထဲကလူတွေက ... ၀ိုင်းကြည့်နေမှာစိုးလို့" "မ ... ကျွန်တော် ... တကယ်ချစ်တာနော် ..." "အို ... သွားတော့နော် ... နောက်ကျနေပြီ"
"ဟင့်အင်း ... မ ... အရင်သွား ... ကျွန်တော် ကြည့်နေချင်လို့ပါနော်" "ကောင်းပြီလေ ... တို့သွားတော့မယ်"
"မ ... ဒီမုန့်လေး ယူသွားပါလားဗျာ ... ညဘက် ... မ ... စာကြည့်ရင်း ... မုန့်စားလို့ရတာပေ့ါ" "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ... သွားပြီနော်" ပြန်ခါနီး အလွမ်းသယ်နေကြသေးတယ် ... သူပေးတဲ့ မုန့်ထုပ်လေးကို ... ကိုင်ရင်း ... ကျွန်မ ... လမ်းတ၀က်ရောက်တော့ ... လှည့်ကြည့်လိုက်မိပါသေးတယ် ... မောင်လမ်းထိပ်မှာ ... ရပ်စောင့်ကြည့်နေတုန်းပါပဲ ... အော် သူ ငါ့ကို ...
တကယ်ချစ်တာနေမှာပါ ... မောင်နဲ့ ပထမဆုံး တွေ့ခဲ့တဲ့ညလေးက ... ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ...
အိမ်ရောက်တော့ ... ရေမိုးချိုးပြီး ... စာကြည့််တောလည်း ကြည့်မရပါဘူး ... မောင့်မျက်နှာပဲ မြင်မြင်နေမိပါတယ် ... ကျွန်မတော့ အချစ်ကြောင့် ... ရူးပြီထင်ပါရဲ့ရှင် ... ရူးလောက်အောင်လည်း ... မောင်က ကျွန်မကို ... သူ့အချစ်တွေ ဖော်ပြပါတယ် ...
လမ်းလယ်ကောင်မှာ ... ဒူးထောက်ပြီး ချစ်ရေးဆိုတာ ... ကျွန်မရဲ့ ဖိနပ်ကို ကိုင်တာ ... ဒီနှစ်ခုနဲ့တင် ... ကျွန်မ ချစ်သွားပြီ မောင်ရေ ... ချစ်သွားပြီ ... မဆွတ်ခင်က ... ညွတ်ချင်နေတဲ့ ... ကျွန်မအကြောင်း ... မောင်သိမှာပါလေ ... ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ ... ဖေဖေနဲ့ မေမေ့ ဓါတ်ပုံရှေ့မှာ ... ကျွန်မ ဦးချရင်း ... တိုင်တည်လိုက်ပါတယ် ... "ဖေဖေနဲ့ မေမေ ... သမီးကို ချစ်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို တွေ့ထားပါတယ် ... သူက သမီးကို တကယ်ချစ်တာလား ... ရိုးသားရဲ့လား ... သမီးသိချင်ပါတယ် ... နောက်ပိုင်းမှ စိတ်ဆင်းရဲ ... ကိုယ်ဆင်းရဲ အရှက်တကွဲ မဖြစ်ရအောင် ... ကြည့်ရှုစောင်မပေးပါအုံး ... ဖေဖေနဲ့ မေမေ ..." သိပ်ချစ်ရတဲ့ ... ဖေဖေ ကျွန်မ ဆယ်တန်းလောက်မှာ ကွယ်လွန်သွားပါတယ် ... တော်သေးတာက ... ကျွန်မတို့ သားအမိ
မျက်နှာမငယ်အောင် ... ဖေဖေ ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ ... အိမ်နှစ်လုံး ငှားရမ်းငွေ ရယ် ... ဘဏ်တိုးရယ်နဲ့ ... ကျွန်မ သားအမိနှစ်ယောက် အေးအေးလူလူ နေလို့ရပါတယ် ... ခက်တာက ... မေမေက ... ဖေဖေ့ကို သိပ်ချစ်တော့ ... အားရင် ... ပြတင်းပေါက်ကနေ ...
ငေးငေးကြည့်နေပါတယ် ... သိပ်မကြာပါဘူး ... နှစ်ပိုင်းပါပဲ ... မေမေကလည်း ... ဒီစိတ်နဲ့ပဲ ... ကွယ်လွန်သွားတော့ ... ကျွန်မ တစ်ယောက်ထဲ ... လောက အလယ်မှာ ... ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေပါတယ် ... ဒါပေမယ့်် ... ကျွန်မ ... စိတ်မညစ်ပါဘူး ... အားကိုးရာမရှိပေမယ့် ... မိမိကိုယ်သာ အားကိုးရာဆိုပြီး ... တစ်ယောက်ထဲနေပါတယ် ... ကျွန်မကို ... ချဉ်းကပ်လာတဲ့ ... ယောက်ျားတွေကိုလည်း ... မယုံရဲတော့ ... ကန်တော့ ဆွမ်းပါဆိုပြီး ... ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ... နှင်လွှတ်ရတာလည်း ...
အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ ... မချစ်မိတာလည်း ပါမှာပေါ့ ... ဒီနေ့တော့ ... ကျွန်မနှလုံးသားကို ... ဆွဲလှုပ်ခါပစ်လိုက်နိုင်တဲ့ ... မောင်ဆိုတဲ့
ကောင်လေးနဲ့ ... စတင်ဆုံဆည်းခဲ့ပါတယ် ... ... ... ...
ဒီလိုနဲ့ ... သုံးလလောက် ... ကျောင်းသွားတိုင်း ... သူစောင့်နေပြီး ... အတူတူသွား ... ကျောင်းပြန်တိုင်း အတူတူပြန်နဲ့ ... ဒီအင်းယားလမ်းပေါ်မှာ ... မောင်နဲ့ ကျွန်မကြားမှာ ... တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုသိလာသလို ... မောင့်ကို
ချစ်ပါတယ်ဆိုတာ ... ဖွင့်မပြောရသေးပေမယ့် ... မောင် သိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ... မျက်ဝန်းချင်းဆုံတိုင်း ... ချစ်မြတ်နိုးစွာ ကြည့်လေ့ရှိတဲ့ ... သူ့အကြည့်တွေကို ... ပြန်ပြန်ကြည့်မိတဲ့ ... ကျွန်မအကြည့်တွေထဲမှာ ... ချစ်ရည်ရွှမ်းနေမယ်ဆိုတာ ...
သေချာတာပေါ့ရှင် ... မောင် အလုပ်ရတော့ ... ကျောင်းသွားရင် မတွေ့ရလို့ ... ကျွန်မ ရင်မှာ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်နေပါတယ် ... ကျောင်းဆင်းချိန်ကျတော့ ... မောင် အမြဲစောင့်နေတတ်ပါတယ် ... မောင်နဲ့ ကျွန်မ လျှောက်ခဲ့တဲ့ ... အင်းယားလမ်းက ... တခါတလေ ... တိုများနေသလားလို့ စိတ်ထဲထင်မိပါတယ် ... တွေ့ရဆုံရတာ အားမရနိုင်တော့ပါဘူး ... ပြန်ခါနီးတိုင်း ...
စိတ်ထဲမှာ ... ၀မ်းနည်းမိပါတယ် ... ကျွန်မက ...မောင့်ကို ချစ်နေပြီဆိုပေမယ့် ... လျှောက်လည်း မလည်ပါဘူး ... တစ်ခါမှ
အိမ်အလည် မခေါ်ဘူးပါဘူး ... တိုက်အောက်ကိုလည်း ... မလာခိုင်းပါဘူး ... လမ်းထိပ်မှာ မောင်ကျန်နေခဲ့ပြီး ... ကျွန်မကို ကြည့်နေခဲ့တော့ ... မောင့်ကို ... ပိုချစ်မိလာပါတယ် ... စိတ်ထဲမှာ ... နီးစပ်ချင်တဲ့ စိတ်လည်း ... ကိန်းအောင်းနေပါတယ် ... ဖေဖော်ဝါရီလ ... ၁၄ ရက်နေ့ ... ချစ်သူများနေ့တဲ့ ... မှတ်မှတ်ရရပါပဲ ... ကျွန်မ ... သိပ်ချစ်ရတဲ့ မောင်ကို ... အဖြေပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ နေ့ပါ ... မနက် ၆ နာရီလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ် ... တံခါးလာခေါက်တယ် ... အိပခ်ျင်မူးတူးနဲ့ ... တံခါးဖွင့်လိုက်တော့ ... မောင်လေ ... အသဲပုံကို ဖက်ထားတဲ့ ၀က်ဝံရုပ်ကြီးနဲ့ ... နှင်းဆီပန်း တစည်းနဲ့ ဖိုင်တစ်ခုကို ... ကိုင်ပြီး ... မတ်တပ်ရပ်နေပါတယ် ...
ဒီနေ့ကတော့ ... ချစ်သူများနေ့ဆိုတော့ ... ချွင်းချက်ပေါ့ရှင် ... မောင့်ကို ... အိမ်လာခဲ့ဖို့ ... ဖိတ်ခဲ့ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် ... ဒီလောက် အစောကြီး မဟုတ်ဘူးလေ ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... ကျွန်မ ... အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ... မနက်စောစောစီးစီး ... သိပ်ချစ်ရတဲ့ ... မောင့်ကို ... တွေ့လိုက်ရတော့ ... မင်္ဂလာရှိလိုက်တာရှင် ... "သိပ်ချစ်ရတဲ့ ... မ အတွက်"
"ဟယ် ... အရုပ်က အကြီးကြီးပဲနော်" "မောင့်အချစ်ကလည်း ... သိပ်ကြီးတယ်လေ" ကျွန်မ ... မောင့်ကို ... ချစ်မျက်စောင်လေး ... ထိုးပစ်လိုက်တယ် ... ကျွန်မ သိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတာ ... ဖုံးဖိလို့ မရတော့ပါဘူး ... ၀က်ဝံရုပ်ကြီးက ... ကြီးလွန်းလို့ ... အိမ်တံခါးဝမှာ တစ်နေပါတယ် ... ကျွန်မက ရှေ့ကနေ ဆွဲ ... သူက နောက်ကနေ တွန်းမှ ... အရုပ်ကြီးက အထဲ ရောက်လာပါတယ် ... သူပေးတဲ့ အရုပ်ကို ... လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာ ... သူ့ကို ချစ်ပါတယ်လို့ ... အဖြေပေးလိုက်တာပဲ မဟုတ်ဘူးလားရှင် ... "အိမ်ထဲဝင်လို့ ... ရတယ်မှတ်လားဟင်" "အင်း ... ၀င်ခဲ့လေ ... ကော်ဖီသောက်မလားဟင်" ကျွန်မတို့ ... ၀က်ဝံရုပ်ကြီးကို ... ဆိုဖာပေါ်တင် ... ပန်းစည်းကို ... စားပွဲပေါ်တင်ထားပြီး ... ကော်ဖီတစ်ခွက်
သွားဖျော်လိုက်ပါတယ် ... နို့ဆီတွေအများထည့်ဖို့ ခပ်လိုက်ပြီးမှ ... သတိရတယ် ... မောင်က ... ကော်ဖီဆို နည်းနည်းခါးခါးမှ ကြိုက်တာလို့ ... သူ့အကြိုက် ဖျော်ပေးပြီး ... သူ့ရှေ့မှာ ချပေးလိုက်တယ် ... သူ့ဘေးမှာ ခပ်ခွာခွာ ၀င်ထိုင်ရင်း ... "မ ... ဒီနေ့ အဖြေပေးမယ်ဆို" "အင်း ... ပေးပြီးပြီလေ"
"ဗျာ ... ဘယ်လို" တော်တော်တုံးတဲ့ ... မောင် ... တော်တော် အတဲ့ ... မောင် ... မိန်းကလေး တစ်ယောက်ထဲနေတဲ့ ... အိမ်ကို လာခိငုးပြီး ... သူပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေကို ... လက်ခံတဲ့
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ... သူ့ကို ချစ်ပါတယ်လို့ ပြောနေရအုံးမှာလား ... ကျွန်မ ချစ်မျက်စောင်းလေး ... ထိုးပစ်လိုက်တယ် ... အ ရန်ကော ဆိုတဲ့ ... အကြည့်နဲ့ ဆတ်ကနဲ ကြည့်လိုက်မိပါတယ် ... ပြီးတော့ ... သူ့ကို ဆက်မကြည့်ရဲတာနဲ့ ...
၀က်ဝံရုပ်ကြီးကိုပဲ ... ကြည့်လိုက်တယ် ... သူ တစ်မိနစ်လောက် စဉ်းစားပြီး ... ကျွန်မ လက်ကို လာကိုင်ပါတယ် ... ကျွန်မ ရင်ထဲ ... ဒိတ်ကနဲ ခုန်သွားပါတယ် ... "အို ... မောင်နော် ..." ကျွန်မ ... လက်ကို ပြန်ရုန်း လိုက်ပါတယ် ... မောင် ... မလွှတ်ပေးတော့ဘူး ... "မောင်တဲ့လား ... သိပ်ချစ်တယ် ... မရယ် ... သိပ်ချစ်တယ်ဗျာ" ပြောရင်းဆိုရင်း ... ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံးကို ... သိမ့်ကနဲ ... ဖက်ပစ်လိုက်ပြီး ... မောင့်မျက်နှာက ... ကျွန်မနားကို ကပ်လာပါတယ် ... ရှက်ရွံ့ခြင်း ... ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကြောင့်် ... ကျွန်မ ပါးပြင်လေးက ... ရဲရဲနီနေမှာပါပဲ .... ပထမဆုံး ... အပျိုစင် ပါးပြင်နုနုလေးကို ... ဖွဖွလေး နမ်းပါတယ် ... နောက်တော့ ... အနမ်းမိုးတွေ ရွာချပစ်လိုက်ပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... ကျွန်မ ... ရှက်ရွံ့ခြင်း ... ကြည်နူးခြင်း ... ချစ်ခြင်းများနဲ့ ... ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ... ကြက်သီးတဖျန်းဖျန်းထလို့နေပါတယ် ... "အို ... ဟင့် ... မောင်နော် ... အဲဒီလို မကဲရဘူးကွာ" ကျွန်မ ... ရှက်ရှက်နဲ့ ... သူ့ကို တွန်းလိုက်မိပါတယ် ... "ပြောပါအုံး မ ရယ် ... မောင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ..." "မောင့်ကို ... ချစ်ပါတယ်ရှင်" ကျွန်မ ... ရှက်လွန်းလို့ ... ခေါင်းလေး ငုံ့ပြီး ... တိုးတိုးလေး ... ချစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်မိပါတယ် ... မောင်ကတော့ ... အားမရဘူး ... အသံလေးက ... တိုးနေတာကိုး ...
"မကြားရဘူးကွာ ... မောင့်ကို ကျယ်ကျယ်လေးပြော" "မောင့်ကို ... ချစ်ပါတယ်ရှင်"
"တကယ်ချစ်တာနော် ... အတည်ချစ်တာနော် ... မောင့်ကို ... တကယ်လက်ထပ်မှာပါနော် ... အပျော်ကြံတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်" "မောင်နော်"
ကျွန်မပြောရမယ့် စကားတွေ ... မောင်ကချည်း ... ပြောနေတယ် ... ကျွန်မ ... ချစ်ဒေါသလေး ထွက်လာတာနဲ့ ... အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ... ကိုက်ပြီး ... မောင့်ကို ... မျက်စောင်းထိုးလိုက်မိပါတယ် ... "အိုး ... မောင့်"
မောင် ... ကျွန်မကို ... ကြည့်ပြီး ... အသည်းယားသွားတယ်နဲ့တယ် ... ကျွန်မကိုယ်လုံးလေးကို ... စွေ့ကနဲ ဖက်လိုက်ပြီး ... ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းတွေကို ... နမ်းပစ်လိုက်တယ် ... မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေအောက်မှာ ... ကျွန်မ ရုန်းဖို့ မေ့သွားပါတယ် ... ကျွန်မ
ထားခဲ့တဲ့ ... မိန်းမသိက္ခာတွေ ... အိနြေ္ဒတွေ အရည်ပျော်သွားပြီရှင် ... မောင်က ... ကျွန်မခါးလေးကို ... လာဖက်ပါတယ် ... ကျွန်မလည်း ... ယောင်ယမ်းပြီး ... သူ့ခါးကို ... ပြန်ဖက်လိုက်ရင်း ... ဆိုဖာပေါ်ကို ... ဖြေးဖြေးလေး ... လဲကျသွားပါတယ် ... နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုက ... ဂဟေဆက်ထားသလို ... မကွဲကွာပဲ ... အလိုက်သင့် ... မောင်က ... ကျွန်မပေါ်မှာ ... အိပ်ရင်း ...
ချစ်အနမ်းတွေ ... ရွာချနေပါတယ် ... အနမ်းတွေက ... ချိုမြိန်လိုက်တာရှင် ... တဇတ်ဇတ်တုန်နေတဲ့ ... အပျိုစင်လေးရဲ့ ...
နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ... မောင် ... ငုံထားပြီး ... လျှာလေးနဲ့ ကလိလိုက်ပါတယ် ... အသဲတွေ ကြွေသွားပြီမောင်ရယ် ... ပထမဆုံး အထိ ည၀တ်ဂါဝန်ရှည်ကြီးအောက်က ... အခုအခံမရှိတဲ့ ... ကျွန်မရဲ့ ... ရင်နစ်ှမွှာက ... ရုန်းကြွလို့နေပါတယ် ... မောင့်ရဲ့
ကိုယ်လုံးက ... ကျွန်မအပေါ်ကို ... ပိကျလာတော့ ... ရုန်းကြွနေတဲ့ ... ရင်သားတွေက ... အိကနဲ ... ပိပြားသွားပါတယ် .... အို ... မောင်ရယ် ... ကျွန်မ ... အတွင်းခံ ၀တ်မထားမိတာ ... မောင်မသိပါစေနဲ့ ... မောင်အ့နမ်းတွေက ... ကျွန်မရင်ကို ...
တသိမ့်သိမ့်တုန်စေပါတယ် ... စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ ... မောင် ပြုသမျှ ... မငြင်းဆန်နိုင်ပဲ ... နုနေမိပါတယ် ... မောင် ... တော်တော်ဆိုးပါတယ် ... ကျွန်မလည်း ... ကြောက်ကြောက်နဲ့ ... နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို ... ခပ်တင်းတင်း စိထားမိပါတယ် ...
မောင့်လျှာလေးက ... ကျွန်မနှုတ်ခမ်း နှစ်ခုကြားမှာ ... ဟိုဟိုဒီဒီနဲ့ ... လျှောက်ထိုးနေပါတယ် ... ဟင့် ... ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေး ဟသွားတော့ ... မောင့်လျှာက ... ပါးစပ်ထဲကို ... တိုးဝင်လာပါတယ် ... တားဆီးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ... မမှီတော့ပါဘူး ...
မောင့်လျှာလေးနဲ့ ... ကျွန်မကို ... မထိတထိ ... ကလိပါတယ် ... မောင် ... တအားဆိုးတယ် ... ကျွန်မရဲ့ လျှာလေးကိုပါ ... စုပ်ယူသွားပါတယ် ... တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းလေးရယ် ... ချစ်သူမောင်ရဲ့ အထိအတွေ့ရယ် ... ကြောင့် ... ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ... ကြက်သီးတဖျန်းဖျန်းထနေသလို ... ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားက ... ရတနာရွှေကြုပ်လေးကလည်း ... ဖောင်းကြွနေပါတယ် ... အထဲက ... တဆစ်ဆစ်နဲ့ ... ယားလာပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... ကျွန်မ ... မောင့်ကို ... ပြန်နမ်းတတ်လာပါတယ် ...
သူ့လျှာလေးကိုလည်း ... ပြန်စုပ်တတ်လာတယ် ... ကလိတတ်လာတယ် ... မောင်သင်ပေးတဲ့ ... အချစ်သင်တန်းကို ... အချိန်တိုအတွင်း ... ကျွန်မ နားလည်သွားပါတယ် ... ဟင့် ... ကျွန်မလေ ... နမ်းနေရင်း ... အရမ်းရှက်လာတော့ ... မောင့်ကို ... ဖွဖွလေး ... တွန်းလိုက်ပါတယ် ... မောင်ကလည်း ... အလိုက်သိပါတယ် ... မနမ်းတော့ပဲ ခွာလိုက်ပြီး ... ချစ်ရည်ရွှမ်းတဲ့ ... မျက်လုံးတွေနဲ့ ... မိုးကြည့်နေပါတယ် ... "မောင် ... အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ"
"မ ... က သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာကိုး" ဆန္ဒတွေကြောင့် ... ရှေ့ဆက်ချင်ပေမယ့် ... လက်မထပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့ ... အသိတရားက ... ကျွန်မကို ... ဟန့်တားလိုက်ပါတယ် ... ကျွန်မက ... မြန်မာမိန်း ကလေးလေ ... ချစ်တာတော့ ချစ်တာပေါ့ ... အိမ်ထောင်မပြုခင် ... အချစ်နယ်မကျွံချင်ပါဘူး ... မင်္ဂလာဦးညကျမှ ... မောင့်ကိုလေ ... ကျွန်မရဲ့ ... အပျိုစင်ပန်းဦးလေး ပေးပန်မယ်လို့ ... ရည်ရွယ်ထားပါတယ် ... မောင့်ကို ... ချစ်လွန်းလို့သာ ... အိမ်ကို ... လာဖို့ ဖိတ်ခဲ့တာပါ ... ဆိတ်ကွယ်ရာ အခန်းထဲမှာ ... မောင်နဲ့ ကျွန်မ ... အတူနေရင် ... ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ... ကျွန်မသိတာပေါ့ရှင် ... အခုတောင် ကြည့်ပါလား ... မောင့်ရဲ့
အနမ်းတွေအောက်မှာ ... ကျွန်မ စိတ်တွေ ယိုင်နေပြီ ... ကြာရင် ... ကျွန်မရဲ့ ... မိန်းကလေး သိက္ခာတွေ ... အကုန်လုံး ... ဒီရေ
တအားတိုးခံရတဲ့ ... တာတမံလို ... ပွင့်ကုန်မယ် ထင်ပါရဲ့ရှင် ... ကျွန်မ ... စိတ်တွေက ... မထချင်ပေမယ့် ... အတင်းထလိုက်ပြီး ... ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချလိုက်မိပါတယ် ... ပြီးတော့ ... ည၀တ်ဂါဝန်ကို ... ဆွဲဆန့်လိုက်ပါတယ် ... မောင်ကတော့ ... ကျွန်မ လုပ်သမျှကို ... လိုက်ကြည့်နေပါတယ် ... "နောက်မဆိုးရဘူးနော် မောင် ..." "အင်းပါ ... မောင် သိပါတယ် ... မ ကို အရမ်းချစ်သွားလို့ပါဗျာ ... စိတ်မဆိုးရဘူးနော်" "တော်ပါ ... သူ့ကို အဖြေပေးမိတာ ... မှားသွားပြီလားမသိဘူး ... အရမ်းကဲတယ်"
"မ ... ရယ် ... မောင်က ချစ်လွန်းလို့ပါ ... ဆိုနေမှ ... မယုံရင် ... အခုလက်ထပ်မလားဟင်" "အိုး ... မောင်နော်"
အရမ်းရှက်မိသွားပါတယ် ... မောင့်ကို ... ချစ်တယ်လို့ အဖြေပေးလိုက်မိတာနဲ့ ... မောင်က တအားကဲလာတာပဲ ... အခုများ
လက်ထပ်လိုက်ရင် ... မောင်က ... ကျွန်မကိုလေ ... အို ... အတွေးရိုင်းလေးတွေက ... ကျွန်မစိတ်ကို ... ရင်သိမ့်တုန်စေပါတယ် ... "မ ... ခဏလေးနော် ... မောင် ... သွေးစစ်လာတာ ပြမလို့ ... ဟိုနေ့က ... မ နဲ့ တူတူသွားစစ်ထားတာ ... ရပြီ ... ရော့ ကြည့်ပါအုံး" "အင်း" ဟိုနေ့က ... ကျွန်မနဲ့ အတူတူသွားပြီး ... စစ်ခဲ့ကြတာပါ ... စာရွက်စာတန်းတွေက ... အတုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ... ဖေဖေ့အသိ မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်ကြီး ... လက်မှတ်လည်း ပါပါတယ် ... ကာလသားရောဂါ၊ HIV ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ နဲ့ တခြား ရောဂါများ ကင်းရှင်းကြောင်း ... လက်မှတ်တွေက ... မောင့်ရဲ့ ရိုးသားမှုကို ... ထောက်ခံပေးလိုက်တာပါပဲ ... ကျွန်မ ... မောင့်ကို ... စိတ်ချလက်ချ ယုံလို့ရပြီ ... ကျေနပ်အားရခြင်း ... အကြည့်တွေနဲ့ ... မောင့်ကို ... ကြည့်ပြီး ...
"ဘာရောဂါမှ မရှိတာ ကောင်းတယ် ... မောင် ... တို့ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ... ရောဂါတွေရှိနေရင် ... မောင်နဲ့ လက်ထပ်လို့မရဘူး ... ဒါကို မောင်နားလည်တယ်မှတ်လား" "အင်း"
"ဒါက ... တို့ရဲ့ ... ဖေဖေနဲ့ ... မေမေပုံလေ" ကျွန်မ ... မောင့်ကို ... ဖေဖေမေမေတို့ပုံ ရှေ့ကို ... ခေါ်သွားပါတယ် ... မောင်က ... လိမ္မာပါတယ် ... အလိုက်လည်း သိတယ် ... ကျွန်မမိဘပုံတွေရှေ့မှာ ... ဂါဝရပြုလိုက်ပါတယ် ... ကျွန်မ ... ဖန်ခွက်လေးထဲ ... ရေဖြည့်လိုက်ပြီး ... "မောင် ... ဒီခွက်ကို ကိုင်ပြီး ... ဖေဖေနဲ့ မေမေရှေ့မှာ သစ္စာဆိုရမယ်နော်" "အင်း ... ဘယ်လို သစ္စာဆိုရမလဲ" "နောက်ကလိုက်ဆို"
"ကျွန်တော် ဟိန်းထက်သည် ... " "ကျွန်တော် ဟိန်းထက်သည် ... " "လှမျိုးသွယ် ကို ... တစ်ယောက်ထဲ ..." "လှမျိုးသွယ် ကို ... တစ်ယောက်ထဲ ..." "မြတ်မြတ်နိုးနိုး ..." "မြတ်မြတ်နိုးနိုး ..." "ချစ်ချစ်ခင်ခင် ..." "ချစ်ချစ်ခင်ခင် ..." "သစ္စာရှိရှိ ..." "သစ္စာရှိရှိ ..." "တစ်သက်လုံး ..." "တစ်သက်လုံး ..." "ပေါင်းသင်းပါ့မယ် ..." "ပေါင်းသင်းပါ့မယ် ..." "ရန်ဖြစ်စကားများပါက ..." "ရန်ဖြစ်စကားများပါက ..."
"မရိုက်နှက်ပါ ..." "မရိုက်နှက်ပါ ..." "မနှိပ်စက်ပါ ..." "မနှိပ်စက်ပါ ..."
"မညှင်းပန်းပါ ..." "မညှင်းပန်းပါ ..." "ကွယ်ရာတွင် ... တခြားမိန်းကလေးကို ..." မောင် ကျွန်မကို ... လှည့်ကြည့်ပါတယ် ... ပြီးတော့ ဆက်ဆိုပါတယ် ... "ကွယ်ရာတွင် ... တခြားမိန်းကလေးကို ..." "ကွယ်ရာတွင် ... တခြားမိန်းကလေးကို ..." "သွေးမဆောင်ပါ" "သွေးမဆောင်ပါ" "မဖောက်ပြန်ပါ" "မဖောက်ပြန်ပါ" "စိတ်နှင့်လည်း ... မဖောက်ပြန်ပါ" "စိတ်နှင့်လည်း ... မဖောက်ပြန်ပါ" "သစ္စာဖောက်ခဲ့သည် ရှိသော်" "သစ္စာဖောက်ခဲ့သည် ရှိသော်" "ကုန်းပေါ်တွင် ... ကုန်းဘေးဖြင့်သေပါစေ" "ကုန်းပေါ်တွင် ... ကုန်းဘေးဖြင့်သေပါစေ" "ရေထဲတွင် ... ရေဘေးဖြင့်သေပါစေ" "ရေထဲတွင် ... ရေဘေးဖြင့်သေပါစေ" "လေထဲတွင် ... လေဘေးဖြင့်သေပါစေ" "လေထဲတွင် ... လေဘေးဖြင့်သေပါစေ" "သွေးပွက်ပွက်အန်ပြီး ... သေပါစေ" "သွေးပွက်ပွက်အန်ပြီး ... သေပါစေ" "ကိုယ်တွင်းရောဂါဆိုးဖြင့် ... သေပါစေ" "ကိုယ်တွင်းရောဂါဆိုးဖြင့် ... သေပါစေ" "ဖြစ်လေရာ ဘ၀တွင်လည်း ..." "ဖြစ်လေရာ ဘ၀တွင်လည်း ..." "လူမဖြစ်ပဲ ... ငရဲတွင်သာ ခံရပါစေ" "လူမဖြစ်ပဲ ... ငရဲတွင်သာ ခံရပါစေ" "ပြီးပါပြီ ... မောင် ... သစ္စာရေကို သောက်လိုက်ပါ ... အခုအချိန်ကစပြီး ... မောင်က ... တို့ကို ... သစ္စာရှိရမယ် ... တို့ကလည်း ... မောင်ကလွဲလို့ ... ဘယ်သူနဲ့ မှ ဖောက်ပြန်မှာ မဟုတ်ဘူး ... မောင် ယုံအောင် ... သစ္စာဆိုပြရအုံးမယ်" "မရယ် ... မကို ... ကျွန်တော် ယုံပါတယ်ဗျာ ... သစ္စာဆိုစရာမလိုပါဘူး"
"အင်း ... ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပါပဲ ... မောင်ရယ် ... တစ်ခုတော့ ... မောင့်ကို ရှင်းထားချင်ပါတယ် ... တို့ ... မောင်ကလွဲပြီး ...
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ ကော်ဖီလည်း မသောက်ဖူးဘူး ... ထမင်းလည်း မစားဖူးဘူး ... မောင်က ... တို့ရဲ့ ... ချစ်ဦးသူ ...
ဒါကိုယုံတယ်မှတ်လား" "အင်း ... မောင်ယုံပါတယ် ... မရယ် ... ယုံပါတယ်"
"ယုံရင်လည်း ပြီးတာပဲ ... နောက်မှ သံသယတွေ မပွားရဘူး" "မပွားပါဘူးဗျာ ... မပွားပါဘူး ... မောင်ယုံပါတယ်"
"ဒါနဲ့ ... မှတ်ပုံတင် မူရင်း ... ပါလာတယ် မှတ်လား" "ပါလာတာပေါ့"
"တကယ်လို့ ... ဒီနေ့ ... မောင် ... ကျွန်မကို ... ရုံးတက် လက်မှတ်ထိုးရမယ်ဆိုရင် ... လက်မှတ်ထိုးမလားဟင်" "ဗျာ ... မ တကယ်ပြောတာလား" မောင် ... အံ့သြခြင်း ... ၀မ်းသာခြင်းများနဲ့ ... ကျွန်မကို ... မော့ကြည့်လိုက်ပါတယ် ... "လက်ထပ်မှာပေါ့ ... မရယ် ... လက်ထပ်မှာပေါ့" မောင် ... ပျော်လွန်းလို့ ... ဆတ်ကနဲ ... ကျွန်မလက်လေးကို ... ဆွဲလိုက်ပါတယ် ... ဖွံ့ထွားတဲ့ ကျွန်မ ကိုယ်လေးက ... မောင့်ရင်ထဲ ... သိမ့်ကနဲ ... လဲပြိုကျသွားတယ် ... ကိုယ်ကို ... အတင်းဖက်ပြီး ... နမ်းပစ်လိုက်ပါတယ် ... ဒီတစ်ခါ
မောင်နမ်းတာတော့ ... နည်းနည်းကြမ်းသည် ... ကျွန်မ ပါး ... မျက်လုံး ... နှဖူး ... နှာခေါင်း ... နှုတ်ခမ်း ... မေးစေ့လေးကို ... အဆက်မပြတ် ဖမ်းမမိအောင် နမ်းပစ်လိုက်သည် ... မောင့် အနမ်းတွေက ... အရမ်းဆိုးတော့ ... ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ... ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်းထနေပါတယ် ... နောက် ... ကျွန်မ လည်တိုင်လေးနမ်းတယ် ... ယားလိုက်တာရှင် ... တခါမှ
အနမ်းမခံဖူးတော့ ... တစ်ကိုယ်လုံး ထွန့်ထွန့်လူးသွားပြီး ... ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ... လိမ်ကျစ်ထားမိပါတယ်ရှင် ... ကျွန်မ ... မနေတတ်လွန်းတော့ ... ခေါင်းလေးမော့လိုက်မိပါတယ် ... အိထွားတဲ့ ကျွန်မရင်သားတွေက ... ည၀တ်အင်္ကျီလေးအောက်မှာ ... ကုန်းထလို့နေပါတယ် ... နူးညံ့ပြီး ... အိစက်တဲ့ ... ကျွန်မ ရင်နှစ်မွှာ ကို ... မောင်လေ ... မောင်ပေါ့ ... ည၀တ်အင်္ကျီလေးပေါ်ကနေ ... နမ်းပစ်လိုက်တယ် ... "အို ... မောင်ရယ် ..." ကျွန်မ ... ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်နေပြီး ... မောင်လုပ်သမျှကိုသာ ... လိုက်လျောနေမိပါတယ်ရှင် ... အို ... ရှင် ... ကျွန်မ
ရင်သားတွေကို ... မောင်နမ်းတော့ ... ကျွန်မလေ ရှက်လိုက်တာရှင် ... တသက်လုံး လုံအောင် ဖွက်ထားတဲ့ ... ရင်နှစ်မွှာက ... မောင့်အနမ်းအောက်မှာ ... အတင်းပဲ ကော့ပေးနေပါတယ်ရှင် ... အထိအတွေ့ ... ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်းထစေတာမို့ ...
မောင့်ကိုလေ ... တားဆီးဖို့ ... မေ့သွားပါတော့တယ် ... မောင့်လက်တွေကလည်း ... အငြိမမ်နေတော့ပါဘူး ... ကျွန်မ ခါးလေးကို လာဖက်တယ် ... ခါးသိမ်သိမ်လေးကို ... အစုန်အဆန်ပွတ်သပ်ရင်း ... ကားတက်နေတဲ့ ... ကျွန်မတင်တွေကို ... လာကိုင်ပါတယ် ... အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်မှာ ... လုံးကျစ်နေတဲ့ တင်တွေက ... လှိုင်းထသလို ... မို့လိုက် ... မောက်လိုက်နဲ့ ... မောင် ကိုင်ရခက်နေပါတယ် ... မောင်ကလည်း ... လည်ပါတယ် ... အတင်းပဲ ... တင်သားလေးကို မောင့်လက်ဖ၀ါးကြီးနဲ့ ...
အုပ်ပစ်လိုက်တယ် ... ကျွန်မတင်တွေက ... ကြီးတာမို့ ... မောင့်လက်နဲ့ မဆန့်ပါဘူး ... အတင်းတော့ မဆုပ်ပါဘူး ... ပွတ်ပဲ ပွတ်နေတာ ... မောင် ပွတ်လေ ... ကျွန်မ စိတ်တွေ ... ဟိုရောက်လိုက် ... ဒီရောက်လိုက်နဲ့ ... ဖြစ်နေပါတယ် ... ကျွန်မ စိုးရိမ်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ် ... တင်နှစ်လုံးကြားက ... ကျွန်မရဲ့ ... ရတနာ ရွှေကြုပ်လေးကို ... မောင်စမ်းမိသွားရင်ဖြင့် ... တွေးပူမိပါတယ် ... မောင့်လက်ကလည်း ... ပွတ်ရင်း ပွတ်ရင်း ... တင်နှစ်ခုကြားကို ... ဦးတည်လာပါတယ် ... "အို ... မောင်နော် ..." စိတ်က ... အနောက်ရောက်တုန်း ... မောင်က ... ကျွန်မ ... ရင်သားလေးပေါ်မှာ ... အနမ်းတွေ ... ဖိကပ်ပြီး ... တစ်ခုခုကို ရှာဖွေနေပါတယ် ... တော်သေးတာက ... ည၀တ်အင်္ကျီလေးခံနေပေလို့ ... နို့မို့ဆိုရင် ... ကျွန်မ ရင်သားထိပ်က ...
ပတ္တမြားခဲလေးကို ... မောင်တွေ့သွား ... "အို ... ဟင့်" စိုးရိမ်တဲ့အတိုင်း ... မောင်တွေ့သွားတာပဲ ... ကျွန်မရင်သားက ထွားတယ်ရှင့် ... ဒါပေမယ့် ... ပတ္တမြားခဲလေးက ... သေးသေးလေး ... ရှိတယ်ဆိုရုံလေးရှိတာပါ ... အခုတော့ ... အခုတော့ ... ဟင့် ... မောင်တွေ့သွားပြီ ... "အိုး ... မောင်ရယ် ... ဟင့်" မောင်လေ ... မောင် ... ကျွန်မ ရင်သားတွေကို ... ဆော့နေတာ ... ကလေးလေးကျနေတာပဲ ... နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ စုပ်လိုက် ... အတင်းဖိနမ်းလိုက် ... လျှာလေးနဲ့ တို့လိုက် ... ကျွန်မလည်း မနေနုင်ိတော့ဘူးရှင့် ... အတင်းပဲ ... ရင်သားကို ... ကော့ပေးမိပါတယ် ... ရှက်လိုက်တာရှင် ... ရှက်လိုက်တာ ... ကျွန်မက အပေါ်မှာ ... သူ အောက်မှာ ... အို ... တစ်ယောက်ယောက်များ တွေ့သွားရင် ... ရှက်လွန်းလို့ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေပစ်လိုက်မယ် ... "မောင် ... တော်ပြီနော် ... တော်ပြီ ... အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ ... တုိ့ ... ငိုချင်လာပြီနော်" မောင် ... အရမ်းဆိုးတယ် ... ကျွန်မ ... ရင်သားထိပ်ဖျားလေးက ... အထိမခံနိုင်ေလာက်အောင် ... နာလာပါတယ် ... မောင်နော် ... ဟင့် ... ကျွန်မကို ... အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ... မိန်းကလေးများ ... အောက်မေ့နေလားမသိပါဘူး ... အပျိုရှင့် ... အပျို ... ဒီလိုမျိုး ... အချစ်ကြမ်းတော့ ... မောင့်ကိုလေ ... ကြောက်တောင် ကြောက်လာတယ် ... ကျွန်မလေ ... အတင်းရုန်း ပြီး ... အိပခ်န်းထဲ
ပြေးဝင်လာပြီး ... တံခါးပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... ရှက်လွန်းလို့ ... မျက်ရည်လေးတွေ ကျလာပါတယ် ... မောင့်ကို ... အဖြေပေးလိုက်မိတာ မှားများမှားသွားပြီလားလို့ ... ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့မှာ ... ကျွန်မ ည၀တ် ဂါဝန်လေးကို ...
ချွတ်ချလိုက်ပါတယ် ... ဖွံ့ထွားတဲ့ ... ရင်နှစ်မွှာ ... သိမ်နေတဲ့ ... ခါးနဲ့ ... ကားစွင့်သွားတဲ့ ... တင်သားတွေက ... အလှကြီးလှနေပါတယ် ... မောင် တအားဆိုးတယ် ... မောင့်အနမ်းဆိုးတွေကြောင့် ... ကျွန်မ ရင်သားထိပ်က ...
ပတ္တမြားခဲလေးက ... နီရဲနေတာပဲ ... အထိတောင် မခံနိုင်တော့ဘူးဟင့် ... အို ... ကြည့်ပါအုံးရှင် ... ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားက ...
ရတနာရွှေကြုပ်လေးထဲမှာ ... အရည်တွေ ... ဘာအရည်တွေလဲ ... ဟင့် ... မောင်နဲ့ ပလူးပလဲနေမိတော့ ... ထွက်ကျလာတဲ့ ... ချစ်ဝတ်ရည်တွေက ... ပေါင်ကြားမှာ ပေပွနေသည် ... ရှက်သွေးက ငယ်ထိပ်တက်ဆောင့်လာသလိုပဲ ... မျက်နှာတစ်ခုလုံး ...
နီရဲလာပါတယ် ... အို ... ခက်တော့တာပဲရှင် ... ဒီညတော့ ... ကျွန်မရဲ့ ... အပျိုစင်ပန်းလေးက ... မောင်ခူး ဆွတ်လိုက်ရင်လေ ... နွမ်းသွားတော့ပေါ့နော် ... ဟင့် ... နှမြောမိပါတယ် ... ၂၇ နှစ်လုံးလုံး ... အထိအခိုက် ... အပွန်းအပဲ့ မရှိအောင် ...
ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ ... ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ်လေးက ... မောင့်လက်ထဲမှာ ... ကြွေမွသွားမှာလားဟင် ... ကျွန်မလေ ... မောင့်ကို ... ဘယ်လိုမျက်နှာခြင်းဆိုင်ရမလဲတောင် မသိတော့ပါဘူး ... ရှက်လိုက်တာရှင် ... ရှက်လိုက်တာ ... ရှက်လွန်းလို့ ... ခြေဖျားလက်ဖျားတွေတောင် အေးစက်လာပါတယ် ...
"မ ... မ ... စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် ... ကျွန်တော် အရမ်းပျော်သွားလို့ပါ" "မ ... မ ... စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာ ... ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ် ... နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး" တမိနစ်လောက် ... စကားပြန်မပြောပဲ ထိုင်နေလိုက်ပါတယ် ... သွေးနည်းနည်းအေးသွားတော့မှ ... အပြင်က မောင့်ကို ... "မောင် ... အရှေ့မှာ သွားစောင့်နေကွာ ... အင်္ကျီလဲနေတယ်" "တော်သေးတာပေါ့ ... မရယ်"
ကျွန်မ ... ရင်စေ့အင်္ကျီလေးနဲ့ ... ထမီလေးကို ... သေချာဝတ်ပြီး ... မောင်နဲ့ ပလူးထားတဲ့ မျက်နှာကို ... မြန်မြန်ပြင်လိုက်သည် ...
ကျွန်မ အပြင်ထွက်လာတော့ ... "မောင်နော် ... အဲဒီလိုမျိုး ဆိုးရင် ... မခေါ်တော့ဘူးနော် ... နောက်မလာနဲ့တော့ ..." "အောင်မြတ်လေး ... မရယ် ... ကျွန်တော့်ကိုတော့ မနှင်ထုတ်ပါနဲ့ ... မ မကြိုက်ရင် ... မလုပ်တော့ပါဘူး" ဒီလိုနဲ့ ... မောင့်ရဲ့ ... အချော့အမြှူအောက်မှာ ... ကျွန်မမျက်နှာလေးက ... နေကြာပန်းလို ... ပွင့်လန်းလာပါတယ် ... မောင်လေ ... အိမ်က ထွက်ကတည်းက ... ကျွန်မလက်ကို မလွှတ်တော့ပါဘူး ... တက်ခ်စီပေါ်မှာလည်း ... လက်မလွှတ်ဘူး ...
ရှက်လိုက်တာရှင် ... မောင်လေ ... သိပ်ကဲတာပဲ ... ကျွန်မတို့ ပန်းဆိုးတန်း တရားရုံးရောက်တော့ ... ရုံးရှေ့က ... ဆိုင်တွေမှာ ...
လက်ထပ်စာချုပ် ... ရွေးပါတယ် ... အနီရောင် ကတ္တီပါအုပ်ထားတဲ့ ပေါ်မှာ ဖဲကြိုးလေး ချည်ထားတဲ့ လက်ထပ်စာချုပ် အဖုံးကို ... ရွေးလိုက်ပါတယ် ... စာရေးမလေးက ... လက်နှိပ်စက်နဲ့ ... စာချုပ်ပေါ်မှာ ... ကျွန်မတို့ နာမည်တွေကို ... တစ်ဖျောက်ဖျောက် ... ရိုက်နေတဲ့အချိန်ကလေ ... ကျွန်မ ရင်တွေ တအားခုန်တာပဲရှင် ... အားလုံးပြီးတော့ ... တရားရုံးပေါ်တက်ပါတယ် ... တရားသူကြီးက သဘောကောင်းပါတယ် ... ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ... "သားက မောင်ဟိန်းထက်နော် ..." "သမီးက ... လှမျိုးသွယ်နော် ..." "ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ" "ဟုတ်ပါတယ် ရှင့်" "သား အသက်က"
"၂၄ ကျော်ပါပြီ ခင်ဗျ" "သမီးက"
"၂၇ ပါရှင့်" "သား မှတ်ပုံတင်အမှတ်က ..." "၁၂/ ...."
"သမီး မှတ်ပုံတင်အမှတ်က ..." "၁၂/..."
"သားမှာ အိမ်ထောင်ရှိပါသလား" "မရှိပါဘူး ... ဆရာ ... မရှိပါဘူး" "သမီးမှာကော" "မရှိပါဘူးရှင့်"
"သမီးနဲ့ မောင်ဟိန်းထက် ... လက်ထပ်ဖို့ ... သဘောတူပါသလား ..." "တူပါတယ်ရှင့်"
"သမီးကို လက်ထပ်ဖို့ ... အတင်းအကြပ်ကိုင်ထားတာတွေ ဘာတွေ များရှိသလား" "မရှိပါဘူး ရှင်"
"နှစ်ဘက်မိဘတွေကတော့ ... မရှိတော့ပါဘူး ... ကွယ်လွန်သွားကြပါပြီ" "အော်အော်"
"အုပ်ထိန်းသူတွေရော ရှိမှာ ပေ့ါ" "မရှိပါဘူးရှင့်"
"ဟုတ်ပြီ ... သားအလှည့်" "သားနဲ့ မလှမျိုးသွယ်နဲ့ ... လက်ထပ်ဖို့ ... သဘောတူပါသလား ..." "တူပါတယ် ခင်ဗျာ"
"သားကို လက်ထပ်ဖို့ ... အတင်းအကြပ်ကိုင်ထားတာတွေ ဘာတွေ များရှိသလား" "မရှိပါဘူး ခင်ဗျာ"
"သက်သေတွေကော ခေါ်လာလား" "ခင်ဗျာ"
"ဟား ဟား ဟား ... ဒီစုံတွဲကတော့ ... ဘာမှမသိဘူးနဲ့ တူတယ် ... လက်ထပ်စာချုပ်မှာ ... သက်သေနှစ်ယောက်လိုတယ်လေ ... ကဲ ... ကဲ ... မောင်သန်းဝေ ... မင်းမိန်းမသွားခေါ်ချည် ... ဒီမှာ သက်သေလာထိုးပေးလို့" "မောင်ဟိန်းထက် ... ခိုးပြေးလာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်"
"မဟုတ်ရပါဘူး ခင်ဗျာ ... မဟုတ်ရပါဘူး ... ကျွန်တော်တို့က အရမ်းချစ်လို့ ... ဆုံးဖြတ်ပြီး လက်ထပ်ကြတာပါ" အို ... မောင်လေ ... သိပ်စကားရှည်တာပဲ ... "ကျွန်တော်တို့က အရမ်းချစ်လို့ ..." ဆိုတဲ့ စကားနောက်မှာ ... ကျွန်မမျက်နှာ ... ဘယ်ထားရမှန်း မသိအောင် ... ပူသွားတာပဲရှင် ... ချစ်တာတော့ ချစ်တာပေါ့ ... တွေ့သမျှလူ လိုက်ကြွားနေတော့ ... ရှက်စရာကြီးရှင် ...
တော်သေးတာပေါ့ ... သက်သေနှစ်ယောက်က ... အဆင်သင့်ရှိနေလို့ ... နို့မို့ဆို ခက်အုံးမှာ ... "ကဲ ... ဒါဆို ... ဒီနေရာမှာ ... လက်မှတ်ထိုးကြ" မောင်နဲ့ ကျွန်မ ... လက်ထပ်စာချုပ်မှာ ... လက်မှတ်ထိုးကြပါတယ် ... ပြီးတော့ စာချုပ်ခြင်းလဲပြီး ... ထိုးကြတယ် ... အားလုံး ပီတီဝေဖြာပြီး ... ပြုံးပျော်နေကြပါတယ် ... တရားသူကြီးမင်းကလည်း ... တံဆိပ်တုံးထု ... လက်မှတ်ထိုးပေးပါတယ် ... "အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီ ... ကဲ ... ဒီလင်ဒီမယား ... အိုအောင်မင်းအောင် ... ပေါင်းရပါစေ လို့ ... ဦး ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ" "ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ ... ခင်ဗျာ" "ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ ... ရှင်" တရားသူကြီးမင်းက ... ကျွန်မတို့ကို ... ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ... "ဒီနေ့တော့ မင်္ဂလာရှိသွားပြီဗျာ ... မနက်စောစော လက်ထပ်စာချုပ် လုပ်ပေးရတာ ... ၀မ်းသာတယ်ဗျို့" "ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ..."
ကျွန်မလေ ... စိတ်ထဲမှာ ... အရမ်းပျော်ပါတယ် ... မောင့်အချစ်ကို ... တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ... ကျေနပ်ခြင်း ... ၀မ်းသာခြင်းများနဲ့ ... အပြုံးတွေက ... မျက်နှာမှာ ဖုံးဖိမရအောင် ... ဝေဆာနေပါတယ်ရှင် ... မောင်လည်း ပျော်နေပါတယ် ...
ချစ်ဦးသူနဲ့ ... လက်ထပ်ခွင့်ရတာ ... မပျော်ပဲနေပါ့မလားဟင် ... သက်သေထိုးပေးတဲ့ ... အစ်ကိုနဲ့ အမနဲ့က ... သဘောကျ ... ၀မ်းသာနေတဲ့ပုံပါပဲ ... "ညီမလေးတို့ စုံတွဲက ... လိုက်တယ်နော် ... မျက်နှာချင်းလည်းဆင်တယ်" "ဟုတ်တယ်နော် ... သက် ... ကိုယ်တို့တုန်းကလိုပဲ ..."
တရားသူကြီးက "ဘာကွ ... မင်းတုန်းက ... ခိုးပြေးလို့ ... မနည်းလိုက်ရှင်းရတာ ... မမှတ်မိဘူးလား" "ကိုသန်းနော် ... ကလေးတွေရှေ့ မှာ ပေါ်ကုန်ပြီ ... လျှောက်ကြွားနေတယ်" "ဟား ဟား ဟား" မသက်က ... "ကျွန်မတို့ကလည်း ... ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင် ... ဒီလင်ဒီမယား ... အိုအောင်မင်းအောင် ... ပေါင်းရပါစေ ... ခလုတ်မထိ ဆူးမငြိပဲ ... ချစ်ခရီးလမ်း ... သာယာဖြောင့်ဖြူးပါစေလို့ ..."
"ဟုတ်ကဲ့ ... မမ ... ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ ရှင်" "ကျေးဇူးတင်တယ်နော် ... အစ်ကို"
"ဟာ ... ရပါတယ်ဗျာ ... ကျွန်တော်တို့က ... ဒါမျိုးဆို ၀ါသနာပါပါတယ် ... နောက်အကူအညီလိုလည်း လာခဲ့ပါ ... ဒီရုံးမှာ ... မောင်သန်းဝေဆို ... အကုန်သိပါတယ်" "ဟုတ် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ" ကျွန်မတို့ ... တရားရုံးက ... ဆင်းလာပြီး ... ဒန်ပေါက်နဲ့ ... ရေခဲမုန့် ... စားကြပါတယ် ... အပေါင်းအသင်းတွေ မပါတဲ့ ... မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲပေါ့နော် ... ပျော်လိုက်တာရှင် ... မောင်ကလေ ... စားနေရင်းနဲ့ ...
"မ ... ကျွန်တော်တို့ ... မင်္ဂလာဦးအလှူအနေနဲ့ ... မျက်ကြည်လွှာသွားလှူရင်ကောင်းမလား" "ကောင်းတယ် ... မောင် ... ဘိုးဘွားရိပ်သာလဲ သွားလှူချင်တယ် ..." "မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းလည်း ... သွားလှူသင့်တယ် ... မရဲ့ ...." "ဟုတ်တာပေါ့ ... သွားကြမယ်လေ ... " ဒန်ပေါက်စားပြီး ... ရေခဲမုန့်စားတော့ ... မောင်က ... "မ ... ကျွန်တော့်ကို ချစ်ရင် ခွံ့ကြွေးရမယ် ..."
"ဟယ် ... မောင်နော် ... လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေ ..." "မရဘူးကွာ ... ခွံ့ကြွေးရမယ် ..." "အို ... ခက်တော့တာပဲ"
"ရော့ ... မြန်မြန်စားနော် ..." ကျွန်မလေ ... ရှက်လွန်းလို့ ... လက်တွေတောင် တုန်တယ် ... ဒါပေမယ့် ... ပျော်တယ်ရှင့် ... မောင်လည်း ကျွန်မကို ... ခွံ့ကျွေးပါတယ် ... ဘေးနားက စုံတွဲတစ်တွဲက ...
"တွေ့လား ... သူများတွေများ ဘယ်လောက် ကြင်နာလဲ ... တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ... ခွံ့ကျွေးနေတယ် ..." "အို ... ကိုကလည်း ... တိုးတိုးပြောပါ ... ဟိုက ကြားသွားအုံးမယ်" အားကျတဲ့ အကြည့်တွေက .... ကျွန်မ ရင်ကို ... လှိုက်ဖိုစေပါတယ် ... ပျော်ရွှင် ကြည်နူးရပါတယ် ... စားသောက်ပြီးတော့ ... မောင်က ... လှည်းတန်းက ... အဆောင်ပြန်ပြီး ... ပစ္စည်းတွေ သိမ်းပြီး ... ကျွန်မအိမ်လိုက်လာပါတယ် ... အိမမ်ှာ ... ပိုက်ဆံထုပ်ယူပြီး ... မျက်စိဆေးရုံမှာ ... မျက်ကြည်လွှာသွားလှူပါတယ် ... နောက် ... မိဘမဲ့ ဂေဟာ ... နောက် ... ဘိုးဘွားရိပ်သာ ... မင်္ဂလာဦးမှာ ... ဒီလိုမျိုးတွေ လှူဒါန်းရတာ ... အရမ်းကြည်နူးမိပါတယ်ရှင် ...
ဒံပေါက်စားပြီး ... နေပူထဲမှာ ... မောင်နဲ့ လျှောက်သွားတော့ ... ကျွန်မခေါင်းတွေ .. ကိုက်လာပါတယ် ... ကျွန်မကို ... အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတဲ့ ...မောင်က ... ကျွန်မ အခြေအနေကို သိပါတယ်. .. "မ ... ခေါင်းကိုက်နေပြီမှတ်လား"
"အင်း ... အရမ်းခေါင်းကိုက်တယ် ... မောင်ရယ် ... " "ဒါဆို ... အိမ်ပြန်ရအောင်လေ ..." "ဟင် ..."
ကျွန်မလေ ... ကျွန်မ ... အိမမ်ပြန်ချင်သေးပါဘူး ... အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ... မောင်နဲ့ ... နှစ်ယောက်ထဲ ... နေရမှာ ...
လက်မှတ်လဲထိုးပြီးပြီဆိုတော့ ... ငြင်းလို့လည်း ... ရမှာမဟုတ်ဘူး ... မောင်နဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ရမှာ ... တွေးရင်းနဲ့ ... ဒူးတောင် တုန်လာတယ် ... ခုနက ... မောင်နဲ့ ... ပလူးပလဲနေခဲ့မိတော့ ... မောင်လည်း စိတ်ကြွနေမှာပေါ့ ... မြတ်နိုးရတဲ့ မောင်ကို ...
ကျွန်မရဲ့ ... သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ ... အပျိုစင်ပန်းလေးကို ... ခူးဆွတ်ခွင့်ပေးရမယ့် အချိန် ... တဖြေးဖြေးနဲ့ နီးကပ်လာပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... ရှက်တာရော ... ကြောက်တာရော ... နှမြောတာရော ခံစားချက်မျိုးစုံက ... ခေါင်းကို ပိုကိုက်စေပါတယ် ... နဖူးလေးမှာ ... ချွေးလေးတွေတောင် စို့လာပါတယ် ... မောင်က ရိုး မလိုနဲ့ ... ဒါမျိုးကျတော့ ... ပါးတယ် ... ကျွန်မ အိမ်မပြန်ချင်ဘူးဆိုတာ သိနေတယ် ... အတင်းပဲ ... အိမ်ကို ချော့ခေါ်လာတယ် ... လာပါ ... မရယ် ...
ခေါင်းကိုက်နေတယ်မှတ်လား ... နေအရမ်းပူတယ် ဘာညာနဲ့ ... ကျွန်မတို့ တိုက်အောက် ရောက်လာပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... အပေါ်ထပ်ကို ... မတက်ချင်ဘူး ... ရင်ထဲမှာ ... ကြောက်နေပါတယ် ... ရှေ့ဖြစ်လာမယ့် ... အခြေအနေတွေကို ... ကြိုသိနေတော့ ... ပိုဆိုးတယ်ရှင့် ... မောင်က ... ကျွန်မကို ... ဆော့ကစားရင် ... အို ... အတွေးလေးတွေက ...
နားရွက်ကလေးတောင် ... ရဲရဲနီသွားစေပါလား ... ကျွန်မရဲ့ ရတနာ ရွှေကြုပ်လေးကလည်း ... အတွေးရိုင်းတွေကြောင့် ... တဖျစ်ဖျစ်နဲ့ ... အထဲမှာ ညှစ်နေပါတယ် ... အို ... မောင်ရယ် ... တို့ ... အရမ်းရှက်တယ်ကွယ် ... "မ ... အရင်တက်နော် ... မူးပြီး လိမ့်ကျမှာ စိုးလို့ ... နောက်ကလိုက်ခဲ့မယ် ..." ကျွန်မလည်း မတက်ချင်တက်ချင်နဲ့ တက်လာခဲ့ပါတယ် ... မောင်က ... သူ့အထုပ်ကြီးကို ... ဆွဲပြီး ... ကျွန်မနောက်က ... လိုက်တက်လာပါတယ် ... လှေခါးတဆစ်ချိုးလောက်ရောက်မှ ... ကျွန်မ သတိထားမိတယ် ... ကားစွင့်နေတဲ့ ကျွန်မ
နောက်ပိုင်းက ... လှေခါးတက်တော့ ... နောက်ကို ကော့သလို ဖြစ်နေမှာပေါ့ ... အို ... ကျွန်မအိုးလေးက ... မောင့်ရှေ့မှာ ... ဆိုတော့ ... လှေခါးတက်တိုင်း ... သိမ့်ကနဲ လှုပ်ခါသွားမှာပေါ့ ... ဟင်း ... ဒါဆို ... မောင့်အကြိုက် ဖြစ်ပြီပေါ့ ... ကျွန်မလေ ... ဘယ်လိုမှ ... လှေခါးကို ... ဆက်မတတ်တော့ဘူးရှင့် ... မောင် ... နောက်ကနေကြည့်နေတော့ ... ရင်ထဲမှာ ... ရှက်ရွံ့စိတ်လေးက ... ကျွန်မ ရင်သားပတ္တမြားခဲလေးကို ... ထောင်ထစေပါတယ် ... "ဆက်တက်လေ ... မရဲ့"
"ဟင့်အင်း ... မောင်က ... နောက်ကနေ လိုက်ကြည့်နေတော့ ... မလျှောက်တတ်တော့ဘူး" "ဟာဗျာ ... မကလဲ ... လင်မယားပဲ ဖြစ်နေပြီ ဥစ္စာ ... ရှက်မနေပါနဲ့ဗျာ ..." "အို ..."
မောင့် အပြောက ... ကျွန်မရင်ကို ပိုတုန်စေပါတယ် ... "ဟင့်အင်း ... ဟင့်အင်း ... မောင်အရင်တက်" "လာပါ ... မရယ် ... တက်ပါ ..." မောင်လေ ... အောက်နေက ... ကျွန်မဖင်လေးကို ... လက်ဝါးကြီးနဲ့ ... ပင့်ပြီးတင်ပေးလိုက်တယ် ... "မောင်နော် ... ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ... လှေခါးမှာ ... လက်မဆော့နဲ့ကွာ" "ဟီး ... မရဲ့ နောက်ပိုင်းက ... အရမ်းလှတယ်နော် ... ချစ်ချင်လာပြီ" "ဟာ ... ကွာ ... မောင်က နှာဘူးလေးပဲ"
"ဟဲ ... ဟဲ ... ကိုယ့်မိန်းမကိုယ် ဘူးတာ ... ဘာဖြစ်လဲ မရဲ့" "အို ... မောင် မကောင်းဘူး"
ကျွန်မလေ ... ရှက်လွန်းလို့ ... သွက်သွက်လေး ပြေးတက်သွားတယ် ... တံခါးသော့ကို ... မြန်မြန်ဖွင့်ပြီး ... အခန်းထဲ ၀င်လိုက်တယ် ... အပူထဲက ပြန်လာလို့လား မသိပါဘူး ... တိုက်အအေးဓါတ်က ... ရင်ထဲမှာ ... အေးကနဲဖြစ်သွားတယ် ...
အိပ်ခန်းထဲ ... သွက်သွက်ဝင်လာတော့ ... ကျွန်မအိပ်တဲ့ ... မွေ့ယာလေးကို မကြည့်ရဲဘူးရှင် ... အရင်တုန်းက ... နေ့တိုင်းအိပ်တဲ့ အိပ်ယာလေးက ... မောင် ... ကျွန်မရဲ့အပျိုပန်းလေးကို ... ချွေမယ့်နေရာ ဖြစ်နေပါရော့လားရှင် ... ကျွန်မ တွေဝေနေတုန်း ... မောင် ၀င်လာပါတယ် ...
"မ ... အ၀တ်တွေ လဲလိုက်ပါလားဟင် ... ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆို ..." "အင်း ... မောင် ... အပြင်ခဏထွက်ပေးနော် ..." "နောက်ဖေးမှာ သံပုရာသီးရှိလား ..." "ဘာလုပ်မလို့လဲဟင် ..."
"အော် ... မောင့်မိန်းမက ... ခေါင်းကိုက်နေတယ်မှတ်လား ... သံပုရာရည်လေး ဖျော်တိုက်မလို့ပါဗျာ" "ဘာ ... မောင့်မနိ်းမလဲ ... ဟွန့် ..."
"မဟုတ်လို့လား ... မရယ် ... ဟောဒီမှာကြည့်ပါအုံး ... လက်ထပ်စာချုပ် ... မ နော် ... အခုမှ ... ဘွာတေးမလုပ်နဲ့ ..." "ဟာကွာ ... မောင်နော် ... သိပ်မစနဲ့ကွာ ... တို့ အရမ်းရှက်တယ် ... ခဏအပြင်ထွက်ပေးနော် ..." "အင်းပါ ... အင်းပါ ... သံပုရာသီး ဘယ်နားထားလဲဟင်" "ရေခဲသေတ္တာ အောက်ဆုံးဆင့်မှာ" "အိုကေ ... ဖြေးဖြေးလဲနော်"
မောင် ... တံခါးလေးပိတ်ပြီး ... အပြင်ထွက်သွားတယ် ... ရင်စေ့အင်္ကျီလေးကို ... ချွတ်လိုက်ပြီး ... အောက်ခံဘော်လီကို ... ၀တ်သင့်မ၀တ်သင့် ... စဉ်းစားလိုက်ပါသေးတယ် ... ကျွန်မတကိုယ်လုံး ချွေးစေးတွေနဲ့ ကပ်စေးနေတော့ ... မ၀တ်ချင်တော့ပါဘူး ... အရင်တုန်းကလည်း ... ကျွန်မ အရမ်းအိုက်ရင် ... ၀တ်လေ့မရှိပါဘူး ... အောက်ခံဘော်လီလေးကို ... ချွတ်လိုက်တော့ ... သားကောင်းမိခင် ရင်နှစ်မွှာက ... ဖွံ့ဖြိုးတင်းရင်းနေသည် ... မနက်ကလေ ... မောင် အရမ်းနမ်းတော့ ...
ကျွန်မကော့ကော့ပေးတဲ့အဖြစ်က ... သိပ်ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲ ... မောင်နမ်းတာ ... မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ပြီး ... ကော့ပေးလိုက်တာ ... မကောင်းပါဘူးရှင် ... မောင် ... ထိပ်ဖျားလေးကို ... အတင်းလိုက်ရှာတုန်းက ... ကျွန်မ ရင်တွေ
လှိုက်ဖိုမောခဲ့ရတာ ... မခံစားတတ်အောင်ပဲရှင် ... အို ... ညကျရင် ... မောင်က ... ကျွန်မတကိုယ်လုံး နမ်းမှာပေါ့နော် ... ဟင့် ... ရှက်ပါတယ်မောင်ရယ် ... မှန်တာဝန်ခံရရင် ... မောင်နမ်းတာကို ... ရှက်ပေမယ့် ... ထပ်ပြီး အနမ်းခံကြည့်ချင်ပါသေးတယ် ... ရင်ထဲမှာ ... လှိုက်ကနဲ ... ဖိုကနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားချက်ကို ... မမေ့နိုင်တော့ပါဘူးရှင် ... ထမီလေးကို ... ချွတ်လိုက်ပြီး ... ကျွန်မ ည၀တ်ဂါဝန်လေးကို ... လဲနေတုန်း ... မသင်္ကာလို့ ... လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ... တံခါးလေးက ... ဟစိလေး
ဖြစ်နေပါတယ် ... အို ... မောင်လေ ... ... ကျွန်မအင်္ကျီလဲတာကို ... ချောင်းကြည့်နေတယ် ... မောင် ... တော်တော်လည်တယ် ... ခုနက ... တံခါးသေချာပိတ်သွားတာမှ မဟုတ်ပဲ ... ကျွန်မလေ ... မောင့်ကို ... ကြောက်လာတယ် ... မောင်က ... ကျွန်မကို အလွတ်ပေးမှာ ... မဟုတ်တာ သေချာသွားပြီ ... ဟင့် ... မောင်နဲ့ ကျွန်မ ... ချစ်တင်းနှောကြရင်ဖြင့် ... ကျွန်မလေ ... ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးစက်လာပါတယ် ... "ဟာကွာ ... မောင် ... အရမ်းဆိုးတယ် ... တို့ အ၀တ်လဲနေတာ ... ချောင်းကြည့်ရသလား" "မ ... က အရမ်းလှတယ်နော် ... မောင်အရမ်းကံကောင်းတာပေါ့နော် ..." "အို ... သွားပါ ..."
"ဘယ်သွားရမှာလဲ ... မရဲ့ ... မင်္ဂလာဦးမှာ ... သတို့သားကို ... အဲဒီလို မနှင်ထုတ်ရဘူးလေ ..." "အို ..." ကျွန်မ ... မျက်နှာလေး ... ရှက်သွေးဖြာသွားပါတယ် ...
"မရှက်ပါနဲ့ မ ... ရယ် ... အခု ခေါင်းမူးနေသေးတယ် မှတ်လား ... ရော့ ... သံပုရာရည်လေး အရင်သောက်လိုက်နော် ... မ" "ကြည့်စမ်းပါအုံး ... မ ရယ် ... ချွေးတွေချည်းပဲ ... ချွေးနဲ့ အအေးပတ်ကုန်တော့မှာပဲ ..." "အင်း ... ခဏနေ ခြောက်သွားမှာပေါ့ ... မောင်ရယ် ..."
မောင် ဖျော်လာတဲ့ ... သံပုရာရည် ချဉ်ချိုလေးကို ... သောက်ပြီး ... ကျွန်မ ခေါင်းမူးတာ နည်းနည်း သက်သာသွားသည် ... အင်း ... ဒီလိုတော့လည်း ... မောင်က ... ချစ်တတ်သားပဲ ... "မ ... ခေါင်းမူးနေရင် ... ခဏလှဲနေလိုက်နော် ..." "အင် ..."
လှဲနေရမယ် ... မောင့်အကြံ ဒါအကုန်ပဲလားဟင် ... မောင်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတုန်း ... ကျွန်မက ... လှဲနေရင် ... မောင့်အကြိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ... ကျွန်မက ... မောင့်ကို ... ကြည့်လိုက်တော့ ... မောင့်ပစုံက ... ရိုးရိုး သားသားပါပဲ ... "မ ... စိတ်ထဲမှာ ... မောင် ... အတင်းဖက်နမ်းမယ်များ ထင်နေလို့လားဟင် ..." "အို ... မဟုတ်ပါဘူး ... မနက်ကလိုဆိုရင် ... တို့ ကြောက်တယ် ..."
"ဟား ဟား ဟား ... မနက်တုန်းက ... ပျော်လွန်းလို့ ဖက်နမ်းလိုက်တာပါဗျာ ... လာလှဲနေလိုက်နော် ... မောင် နှိပ်ပေးမယ် ... လာ ... လာ"
ကျွန်မလေ ... မလှဲချင်လှဲချင်နဲ့ ... မွေ့ယာပေါ်ကို ... လဲကျသွားပါတယ် ... မောင်က ဘေးမှာလာထိုင်ပါတယ် ... ကျွန်မက ပက်လက်ကလေးပေါ့ ... မောင်လေ ... ကျွန်မ မျက်ခုံးလေးကို ... စနှိပ်ပေးတယ် ... မောင်က ရိုးရိုးသားသားနှိပ်ပေးပေမယ့် ...
ရင်တွေ ခုန်နေတဲ့ ... ကျွန်မက ... မရိုးသားတာလားဟင် ... ည၀တ်ဂါဝန်အောက်က ... ရင်နစ်ှမွှာက ... ဖားဖိုကြီးလို ... မို့လိုက် ဖောင်းလိုက်နဲ့ ... စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ ... မောင် တွေ့မှာပါလေ ... "အို ... မလုပ်ပါနဲ့ ... မောင်ရယ် ... ငရဲကြီးကုန်ပါ့မယ် ..."
"မကြီးပါဘူးကွာ ... မျက်စိလေး မှိတ်ထားနော် ... သေချာနှိပ်ပေးမယ်" လေးငါးမိနစ်လောက် ... မောင် ... သေချာနှိပ်ပေးပြီးနောက် ... "ဘယ်လိုလဲ ... အနှပ်ိခံရတာကောင်းတယ်မှတ်လားဟင် ..." "အင်း ... မောင်က တအားတော်တာပဲ ..."
"မ ... နည်းနည်းနာမယ်နော် ... ဒီငယ်ထိပ်က ဆံပင်စုလေးကို ... ဆွဲပေးမယ် ..." "အရမ်းနာအောင် ... မလုပ်နဲ့ မောင်ရယ် ..."
"သိပ်မနာပါဘူး ... တမိနစ်ပဲ ဆွဲမှာပါ ... ဒါမှ မ ခေါင်းထဲက ... အပူတွေ ပျောက်သွားမှာ ..." "လုပ်ကြည့်လေ ... နာရင်တော့ ... အော်မှာ နော် ..." မောင် ... ကျွန်မ ငယ်ထိပ်နားက ... ဆံပင်စုလေးကို ... ဆွဲလိုက်သည် ... "အား ... နာတယ် ... နာတယ် ... မောင် ... လွှတ်ကွာ ... အရမ်းနာတယ် ..." "ခဏလေး ... ခဏလေး ... တမိနစ်ပဲ ..."
"ဟင့်အင်း ... ဟင့်အင်း ... နာတယ် ... မောင်ရယ် ... လွှတ်ပါတော့ ..."
ကျွန်မလေ ... နာလွန်းလို့ ... ယောင်ယမ်းပြီး ... မောင့်ပေါင်ကို ... ကိုင်ထားမိတယ် ... မောင့်ရဲ့ပေါင်ကလေ ... မာတောင့်နေတာပဲ ... မောင်က ... ၀ိတ် သွားသွား မထားတော့ ... ကြွက်သားတွေက ... မာပြီးတင်းနေတာပဲရှင် ... ကျွန်မ ... မောင့်ပေါင်ကြီးကို ... ကိုင်လိုက်တော့ ... မောင်လည်း တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် ... "အခု ... အပူထွက်သွားပြီမှတ်လားဟင်" "အင်း ဟုတ်တယ်နော် ... မောင်က အရမ်းတော်တာပဲ" "တော်ရမယ်လေ ... မရဲ့ မောင်ပဲဟာ ... ဟဲ ... ဟဲ" "မောင် ... ဖယ်တော့လေကွာ ... " "ဟင့်အင်းကွာ ..."
"မောင်နော် ... ဖယ်ပါကွာ ... တို့ ကြောက်တယ် ..." "ဘာကို ကြောက်တာလဲဟင် ..." "မောင့်ကို ကြောက်တာ ..."
"မောင်က ... ဘာလုပ်လို့လဲဟင် ..." "အို ... မောင်နော် ... သိရဲ့သားနဲ့ ... ဟိုလေ ... ဟာကွာ ... တို့ ... ကြောက်နေတယ်ကွာ ..." "အင်းပါ ... မရယ် ... ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး ... ခြေလက်မျက်နှာ သွားဆေးလိုက်နော် ..." "အင်း ..." ကျွန်မ ... ရေချိုးခန်းထဲ ... ၀င်ပြီး ... ခြေလက်မျက်နှာဆေးရင်း ... မထူးတော့ပါဘူး ... တကိုယ်လုံးက ... ချွေးစေးတွေနဲ့ ... နံနေသလို ဖြစ်နေတော့ ... ရေချိုးလိုက်တယ် ... တော်ကြာ ... မောင်နမ်းလို့ ... အနံ့ထွက်နေရင် ... အထင်သေးသွားမှာ စိုးပါတယ် ... ကျွန်မရဲ့ ရင်နစ်ှမွှာကလေ ... အရမ်းတင်းပြီး ... ထိပ်ဖျားလေးတွေက ... ထောင်နေပါတယ် ...
ဘာကြောင့်မှန်းမသိတဲ့ ... ခံစားချက်တမျိုးကို ... ရင်ထဲက ... တောင့်တနေပါတယ် ... မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေကိုလား ... မောင့်ရဲ့ အထိအတွေ့တွေကိုလား ... မပြောတတ်ပါဘူးရှင် ... ပေါင်ကြားက ရွှေကြုပ်လေးထဲမှာလဲ ... ချွဲပြစ်တဲ့ ... အရည်တွေနဲ့
ကပ်စေးနေပါတယ် ... သေချာ ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပြီး ... အတွေးရိုင်းလေး ... ၀င်လာပါတယ် ... ညကျလို့ ... မောင်နဲ့ ချစ်တင်းနှောရင် ... မောင်က ... ကျွန်မရဲ့ ... ရွှေကြုပ်လေးကို ... နမ်းမှာလားဟင် ... မနမ်းလောက်ဘူးထင်ပါတယ် ... မောင်
ဘုန်းနိမ့်သွားမှာပေါ့ ... ဟင့်အင်း ... မနမ်းခိုင်းရက်ပါဘူး ... အို ... ငါဘာတွေ လျှောက်တွေးနေတာလဲမသိပါဘူး ... ဒါပေမယ့် ... အတွေးတွေကြောင့် ... ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ... တောင့်တင်းနေပြီး ... တစ်ခုခုကို တောင့်တနေတယ်ဆိုတာ ... လိမ်လို့မရပါဘူးရှင် ... မောင်ချစ်ချင်လည်း ... ချစ်ပါစေတော့ ... အပျိုစင်ပန်းဦးလေးကို ... ချွေမယ်ဆိုလည်း ... ချွေပါတော့ ... မောင်ရယ် ... တို့ ... ခွင့်ပြုရမှာပေါ့ ... ဟုတ်ဖူးလား ... ရေချိုးပြီးနောက် ... မျက်နှာသုတ်ပ၀ါကြီးကို ... ကိုယ်လုံးလေးမှာ ပတ်ပြီး .... အပြင်ထွက်လာတော့ ... မောင်စောင့်နေပါတယ် ... "အို ... ဒုက္ခပါပဲ" ကျားရှေ့ မှောက်ရက်လဲသလိုပါပဲ ... မျက်နှာသုတ်ပ၀ါက ... တောင့်တင်းကျစ်လစ်တဲ့ ... ကျွန်မကိုယ်လုံးလေးကို ... လုံခြုံအောင် ... ဘယ်ကာထားနိုင်ပါ့မလဲရှင် ... ဖွံ့ထွားတဲ့ ... ရင်နစ်ှမွှာက ... တ၀က်လောက်ပေါ်နေပြီး ... ဖြူဝင်းတဲ့ရင်သားဆိုင်တွေက ...
မို့မောက်ကာ ... တင်းတင်းလေး ရုန်းထနေသည် ... မောင်လေ ... ကျွန်မကို ... မြင်တာနဲ့ ... အတင်းဖက်နမ်းတော့တာပဲရှင် ... "အို ... မောင် ... မနမ်းနဲ့ကွာ ..." "အို ... ဟင့် ... ပြောလို့လဲ မရဘူး ..." မောင်လေ ... ကျွန်မကိုယ်လေးကို ... အတင်းဖက်ထားပြီး ... မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ... လျှောက်နမ်းတော့တာပါပဲရှင် ...
ရှက်လွန်းလို့သာ ... ရုန်းကန်နေတာ ... ကျွန်မ ငြင်းဟန်လေးက ... အားမရပါဘူး ... မနက်က ... မောင့်အနမ်းတွေကို ...
တမ်းတနေမိတော့ ... မရုန်း မိပါဘူး ... မောင်လေ ... ကျွန်မကို ... နမ်းနေရင်းနဲ့ ... မွေ့ယာလေးပေါ်ကို ... နှစ်ယောက်သား ... လဲကျသွားပါတော့တယ် ... မောင့်အနမ်းတွေက ... မျက်နှာတစ်ခုလုံး လျှောက်နမ်းနေသလို ... ကျွန်မရဲ့ ရင်ခန်ုသံတွေကလည်း ... မြန်လာပါတယ် ...
အို ... မောင်ရယ် ... ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ... လာနမ်းတဲ့ ... မောင့်အနမ်းတွေက ... ပူနွေးလွန်းပါတယ် ... ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းအိအိလေးတွေကို ... မောင် စုပ်ယူသွားတော့လေ ... ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်သွားတာပဲရှင် ... အို ... မောင်ရယ် ...
မောင့်ရဲ့ လျှာလေးက ... ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းကြားထဲ တိုးဝင်လာပြန်ပြီ ... အို ... အို ... မောင်နော် ... ဟင့် ... ကျွန်မလျှာလေးကို ... မောင် စုပ်ယူသွားလိုက်တာ ... ကျွန်မ ရင်ထဲက အသဲတွေပါ ... ပါသွားမတတ်ပါပဲရှင် ... မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေက ... ချိုမြိန်လွန်းတော့ ... မျက်စိလေး စင်းပြီး ... မောင့်ကို ... တင်းတင်းဖက်ထားရင်း ... မောင်ချစ်သမျှ
ကျွန်မလိုက်လျောလိုက်ပါတယ် ... ဟင်း ... အနမ်းတွေက ... ငါးမိနစ်လောက်ကြာတယ် ထင်တယ် ... မောင်နဲ့ ... ကျွန်မ ...
ခဏလေး နမ်းတာရပ်သွားတော့ ... သက်ပြင်းလေးခိုးချမိပါတယ် ... မောင်ရယ် ... ချစ်ချင်သလိုသာ ချစ်ပါတော့ ... မောင်ရယ် ... ကျွန်မရင်ထဲမှာလေ ... မောင်ချစ်သမျှကို ... လိုက်လျောချင်နေတဲ့ ... ဆန္ဒအပြည်ပ့ါပဲကွယ် ... "အရမ်းချစ်တယ် ... မ ရယ် ..."
"ချစ်တာပေါ့ ... မောင်ရယ် ... ချစ်တာပေါ့ ..." "မ ... ကျွန်တော် ... မ ကို ... အရမ်းချစ်လို့ ရပြီလားဟင် ..." "အို ..."
ကျွန်မလေ ... မောင့််အမေးကို ... မဖြေနိုင်အောင် ... ရှက်ရွံ့သွားပါတယ် ... မောင် တော်တော်ဆိုးတယ်ရှင် ... အပျိုစင်လေးကို ... ဒါမျိုးမေးစရာလားလို့ ... ချစ်လွန်းလို့ ... လက်ထပ်လိုက်တာပေါ့ ... မောင် ပြုသမျှ ... နုမယ့် ... တို့ပါကွယ် ... ကျွန်မလေ ... ရှက်လွန်းလို့ ... မောင့်မျက်နှာကို မကြည်ရ့်ဲတော့ဘူး ... ခေါင်းလေး စောင်းကာ ...
မျက်စိလေးကို မှိတ်ပြီး ... ဆက်ချစ်လာမယ့် ... မောင့်အနမ်းတွေကို ... စောင့်နေလိုက်ပါတယ် ... ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် ... ၀န်ခံခြင်းလို့ ... မောင်မှတ်ယူလိုက်တယ် ထင်ပါတယ် ... ခေါင်းလေးစောင်းသွားတဲ့ ... ကျွန်မရဲ့
လည်တိုင်ဝင်းဝင်းလေးကို ... နမ်းပါတယ် ... အို ... မောင်ရယ် ... ဘယ်လိုများ နမ်းလိုက်တာလဲဟင် ... ကျွန်မ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထသွားပါတယ် ... မောင်လေ ... အနမ်းတွေက .. တဖြေးဖြေး အောက်ဆင်းလာပါတယ် ... အို ...
မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးက ... တင်းတင်းစီးထားတော့ ... ရင်နစ်ှမွှာက ... မို့မောက်နေပါတယ် ... မောင် ... ကျွန်မရဲ့ ... ရင်နှစ်မွှာကြားကို ... စနမ်းပါတယ် ... အို ... ရှင် ... သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေလာတဲ့ ... ကျွန်မရဲ့ ... ရွှေရင်မို့မို့လေးက ...
မောင့်အနမ်းတွေကြောင့် ... ပိုပြီး ကော့လာပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... မောင့်ခေါင်းကို ... တွန်းဖယ်လိုက်ချင်ပေမယ့် ... မတွန်းဖယ်ရက်ပါဘူး ... ဆွဲအားတစ်ခုက ... မောင်ဆက်နမ်းဖို့ ... တွန်းအားပေးနေပါတယ် ... "မ ... မောင် ... ဖြည်လိုက်တော့မယ်နော် ..." "အို ... ဟင့်"
မောင်ပေါ့ ... ကျွန်မရဲ့ ... အဖြေတောင် မစောင့်တော့ဘူး ... မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးကို ... ဖြည်လိုက်ပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... မောင့်လက်ကလေးကို ... အမြန်ဖမ်းပြီး ... "မောင်က ... တို့ကို ... တကယ်ချစ်တာပါနော် ..."
"မေးနေစရာလိုသေးလား ... မ ရယ် ... ချစ်တာပေါ့ ... အရမ်းချစ်တာပေါ့ ..." "တို့လည်း ... မောင့်ကို ... အရမ်းချစ်တယ်ကွယ် ... မောင် ... တို့ကို ... ပစ်မသွားရဘူးနော်" "ပစ်သွားစရာလား ... မ ရယ် ... ဒီလောက်ချစ်တဲ့ဟာကို ..."
"အင်းပါ ... မောင်ရယ် ... တို့ ယုံပါတယ် ..." ကျွန်မလေ ... မောင် ဆက်နမ်းဖို့ ... လိုက်လျောလိုက်ပါတယ် ... သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်ဦးသူ ... နမ်းချင်သလိုသာ နမ်းပါစေတော့ ... မောင်ပျော်ရင် ... ကျွန်မပျော်တာမို့ ... မောင်လိုချင်တာ ... ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး ... ရင်နှစ်မွှာကို ... မောင်နမ်းမယ့် အနမ်းတွေကို ... ရင်ခန်ုစွာနဲ့ ... စောင့်နေလိုက်ပါတယ် ... မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးက ... လှပ်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး ... ကျွန်မရဲ့ ... အလှတရားတွေ ... ပေါ်လာပါတယ် ... ဖြူဝင်းတဲ့ ... ရင်နှစ်မွှာက ... အလုံးတူ ၀ိုင်းစက်နေပြီး ... အလယ်မှာ ... ပတ္တမြားခဲလေးက ... တင်တယ်ဆိုရုံလေးတင်ထားတာပါ ... ကျွန်မရဲ့ ... ရင်အလှကို ကြည့်ပြီး ... မောင်မနေနုင်ိတော့ပါဘူးရှင် ... "လှလိုက်တာ ... မ ရယ် ... အရမ်းလှတယ် ..." "အို ... မောင်ရယ် ..."
မောင် ... ကျွန်မ ရင်သားတွေကို ... မက်မက်မောမောနဲ့ ... ကြည့်ပြီး ... အရမ်းကို သဘောတွေကျနေပါတယ်ရှင် ... "မောင်ရယ် ... အဲဒီလိုမျိုးကြီး ... စိုက်မကြည့်နဲ့လေကွာ ... အရမ်းရှက်ပါတယ်ဆိုနေမှ ... ဟင့်" "လက်တွေ မကာနဲ့လေ ... မရယ် ... ဖြေးဖြေးလေး ကိုင်မယ်နော် ..." ကျွန်မ ကာထားတဲ့ ... လက်လေးတွေကို ... ဆွဲဖယ်လိုက်တယ် ... ရှက်တာရယ် ... ကြောက်တာရယ်ကြောင့် ... မဖယ်ပေးရဲပါဘူး ... မောင်လေ ... ကျွန်မ လက်ကလေးကို နမ်းလိုက်တယ် ... "ဖယ်ပေးပါနော် ... မရယ် ... မောင်ကိုင်ချင်လို့ပါ ..." "အို ... မောင်ရယ် ... ကျွန်မလေ ... မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး ... ကျွန်မလက်ကို ဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ် ... သိပ်ချစ်လွန်းတဲ့ မောင့်ကို ...
လိုက်လျောရမှာပေါ့ရှင် ... မောင် ... ကျွန်မ ရင်သားအိအိလေးကို ... ဖွဖွလေး လာကိုင်ပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် ... အသဲယားလိုက်တာရှင် ... မောင် ... ကျွန်မရင်တွေကို ... ခြေမွပစ်မှာလားဟင် ... "မောင် ... ဖြေးဖြေးနော် ..."
"အင်းပါ ... မရယ် ... မရင်သားတွေက ... သစ်တော်သီးလောက်ရှိတယ်နော် ..." "အို ... မောင်နော် ... မပြောနဲ့ကွာ ... တို့ နားရှက်တယ်" "တင်းနေတာပဲနော် ..."
"ဟိတ် ... မောင် ... ပြောလေဆိုးလေပါလား" "မောင် ... ညှစ်ချင်တယ်ကွာ ..." "ဟင့်အင်း ... နော်" မောင်လေ ... ကျွန်မရင်သားတွေကို ... ဖွဖွလေး နယ်ပစ်လိုက်တယ် ... ကျွန်မ ... အသွေးအသားတွေ ဗြောင်းဆန်သွားတာပဲရှင် ...
"အို ... ဟင့် ..." ရင်နှစ်မွှာကို ... မောင် စိတ်ကြိုက် ... ကိုင်တော့လေ ... ကျွန်မ ... ရင်တွေ ပူလာပါတယ် ... ကြက်သီးတွေက တဖြန်းဖြန်းထလို့
... တကိုယ်လုံးလည်း ... ထွန့်ထွန့်လူးနေတာပဲ ... မောင်လေ ... ကျွန်မ ... ရင်နစ်ှမွှာကို ... နမ်းတော့တာပဲရှင် ... မောင့်ရဲ့ မွတ်သိပ်တဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် ... ကျွန်မ ရင်တွေ ... အရမ်းခုန်ပြီး ... ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ် ... အို ... မောင်ရယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မ ...
ရင်သားထိပ်ဖျား သေးသေးလေးကို ... အတင်းစုပ်ေတာ့ ... ကျွန်မ ... နှုတ်ခမ်းလေးက ... မမျိုသိပ်နိုင်တော့ဘူးရှင့် ... "အို ... ဟင့် ..." မောင်လေ ... ကျွန်မ ရင်သားတစ်ဖက်ကို နမ်းတယ် ... တစ်ဖက်ကလည်း ... ဆော့ကစားတယ် ... သိပ်ဆိုးတယ် မောင်ရယ် ... အို ... ဖြေးဖြေး စို့ပါကွယ် ... တို့ ... မောတယ်ကွာ ... မနေတတ်ဘူးကွယ် ... မောင် ကျွန်မ ရင်သားကို ... ဖွဖွလေး နယ်နေရင်း ... ထိပ်ဖျားလေးကို ... လက်မနဲ့ လက်ညှိုး ... ညှပ်ပြီး .. ချေလိုက်ပါတယ် ... အစေ့လေးက ... သေးသေးလေးမို့ ... မောင်ကိုင်ရခက်နေပါတယ် ... မောင်လေ ... မရမက ... အတင်းညှစ်ပါတယ် ...
"အ ... မောင် ... အရမ်းမညှစ်နဲ့ကွာ ... တို့ ... မနေတတ်ဘူး .. အရမ်းယားတယ်ကွာ ... အို ... ဟင့် ..." "ဟင့် ... မောင်ကွာ ... အာ ... ရှီး ... ဟင့် ... ကျွတ် ... ကျွတ် ... ရှီးး ... " ကျွန်မ ဗိုက်ထဲက ... ကလီစာတွေ ဗြောင်းဆန်ကုန်ပြီလား မသိပါဘူးရှင် ... အတင်း နမ်းနေတဲ့ ... မောင့်ခေါင်းကို ...
တွန်းဖယ်ရမယ့်အစား ... ကျွန်မလက်တွေက ... မောင့်ဆံပင်တွေကြားထဲ ... ထိုးထည့်ပြီး ... အတင်းဖိပေးနေပါတယ် ... အောက်က ရင်နှစ်မွှာကလည်း ... ကော့ကော့ပေးနေပါတယ် ... ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲဟင် ... ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ထိန်းချုပ်လို့မရတော့အောင် ... မောင့်ကို ချစ်မိသွားတာလား မသိတော့ပါဘူးရှင် ... "မောင် ... ရယ် ... တော်ပါတော့နော် ... တို့ ရင်တွေ အရမ်းမောနေပြီ ..." မောင်လေ ... ကျွန်မကို ... စကားတောင် ပြန်မထူးတော့ဘူး ... အဆော့မက်တဲ့ကလေးလိုပဲ ... အရုပ်သစ်လေးရတော့ ... ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ဖြစ်နေပြီ ... နူးအိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ရင်နှစ်မွှာ က ... မောင်အ့နမ်းတွေ ... မောင့်အဆုပ်အညှစ်လေးတွေ ... မောင့်ဝင်သက်ထွက်သက်လေကြောင့် ... အရမ်းကို ... တင်းပြီး ... ကြွတက်မို့မောက်နေပါတယ် ...
မောင်လေ ... ကျွန်မ ရင်သားတွေကို ... နမ်းနေရင်းက ... အနမ်းတွေက ... အောက်ကို ရွေ့လာပါတယ် ... ကျွန်မဗိုက်လေးကို နမ်းတယ် ... ချက်ကလေးနားရောက်တော့ ... လျှာလေးနဲ့ ကလိပါတယ် ... "အို ... မောင့် ... " မောင့်အနမ်းတွေက ... ကျွန်မ ဗိုက်လေးကို ... လှိုင်းထစေပါတယ် ... ချက်နားကလေ ... အောက်ကိုရွေ့တော့လေ ... ကျွန်မ ...
ရှက်လိုက်တာရှင် ... မောင့်ကိုလေ ... ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ပြောပြော ... အပျိုစင်လေးမို့ ... အရမ်းရှက်မိပါတယ် မောင်ရယ် ... တသက်လုံး ... လုံလုံခြုံခြုံ ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ ... ကျွန်မရဲ့ ရတနာရွှေကြုပ်လေးက ... ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာ ...
ဖောင်းကားနေပါတယ် ... အို ... ဟင့် ... မောင် ... ကျွန်မ ပန်းလေးကို ... ကြည့်နေတာပေါ့လေ ... ကျွန်မ ပေါင်လေး နှစ်ဖက်ကို ... လိမ်ကျစ်ပြီး ... နောက်ဆုံး ခံတပ်ကို ... ကာကွယ်နေပါတယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မပေါင်လေးကို ... ဖြဲကြည့်တယ် ... မရဘူး ... မောင်ရယ် ... တို့ ... အရမ်းရှက်တယ် ... အရမ်းကြောက်တယ်ကွာ ... မောင်လေ ... ဆီးခုံမို့မို့လေးပေါ်က ...
အမွှေးလေးတွေကို ... မြင်သွားပြီပေါ့ ... မောင် ... အမွှေးလေးတွေကို ... နမ်းလိုက်ပါတယ် ... မြတ်မြတ်နိုးနိုးပေါ့ရှင် ... မောင်က ... စိတ်ရှည်ပါတယ် ... ကျွန်မ ကြောက်နေတာသိနေတော့ ... ပေါင်လေးကို ... နမ်းတယ် ... ခြေသလုံးလေးကို ... နမ်းတယ် ... ခြေဖမိုးလေးကို နမ်းတယ် ...
"မောင် ... နော် ... ခြေထောက်တွေ လျှောက်မနမ်းနဲ့ကွာ ... မောင် ဘုန်းနိမ့်လိမ့်မယ် ... ဟိတ် ... အာာာ" "မောင် ... ရယ် ..." မောင်ရယ်လို့ပဲ ... ကျွန်မ ပြောနိုင်ပါတော့တယ် ... ကျွန်မ ခြေမလေးကို ... မောင်ပေါ့ ... သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး ... စုပ်နေပါတယ်
... ကျွန်မလေ ... ကျွန်မ ... မောင့်ကို ... အရမ်းချစ်သွားတယ် ... မောင့်ရဲ့ အပြုအစုတွေကြောင့် ... ကျွန်မ ကြွေသွားပြီကွယ် ... ကဲ ... မောင်ရယ် ... မောင် ဆွတ်ခူးချင်တဲ့ ... တို့ရဲ့ အပျိုစင်ပန်းလေးကို ... ယူပါတော့ ... ကျွန်မလေ ... လိမ်ကျစ်နေတဲ့ ...
ပေါင်လေး နှစ်ချောင်းကို ... ဖြေပေးလိုက်တယ် ... ဆွတ်ခူးလိုက်ပါ ... မောင်ရယ် ... ဆွတ်ခူးလိုက်ပါ ... ကျွန်မ ပေါင်နှစ်ချောင်း ... အားလျော့သွားတာ ... မောင်သိတယ် ... လူပါးလေး မောင်က ... အနမ်းတွေ ပေးရင်း အပေါ်ပြန်တက်လာတယ် ... ကျွန်မလေ ... အသဲယားလွန်းလို့ ... မျက်စိလေး မှိတ်ထားလိုက်ပါတယ် ... မောင်လေ ... ပေါင်ကြားထဲ ... မျက်နှာ ... ဘယ်လို ရောက်သွားလဲ မသိပါဘူး ... ကျွန်မက ... ဟပေးလိုက်တာလား ... မောင်က ... ဖြဲပြီး ၀င်လာတား ... "လှလိုက်တာ မ ... ရယ် ... အရမ်းလှတာပဲ ..." "အို ... မောင်နော် ..."
ကျွန်မ ... ရွှေကြုပ်လေးကို ... မောင် ... တို့ကြည့်တယ် ... ထိကြည့်တယ် ... အမွှေးနုနုလေးတွေ ... သဘောကျလွန်းလို့ ... နမ်းတယ် ... ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ ... ကျွန်မ ပန်းလေးကို ... နမ်းတယ် ... အရမ်းရှက်ပေမယ့် ... မောင့်ကို မတားနိုင်တော့ပါဘူး ...
မောင့်ကို တားမယ့် ... နှုတ်ခမ်းလေးက ... အားစေးထည့်သလို ... နှုတ်ပိတ်နေပါတယ် ... မောင်လုပ်ချင်တာသာ လုပ်ပါတော့ ... မောင်ရယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မ ... အတွင်းခံလေးကို ... ဘေးကပ်လိုက်တယ် ... ပန်းလေးပေါ်က ... အတွင်းခံလေးက ... ဘေးကပ်သွားပြီး ... ကျွန်မ ပန်းလေးကို ... ဖြဲကြည့်တယ် ... ရှက်လိုက်တာ မောင်ရယ် ... ရှက်လိုက်တာ ... ကျွန်မလေ ... ကျွန်မ ... မျက်စိကို မှိတ်ပြီး ... ခေါင်းအံုး အဖျားလေးကို ... ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ... ဆွဲထားရင်း ... အရှက်ဖြေနေရတယ် ... "မ ... အဖုတ်လေးက ... အရမ်းလှတယ်ကွာ ..."
"အို ... မောင်နော် ဟင့် ... မကြည့်နဲ့တော့ကွာ ... အရမ်းရှက်လာပြီ ..." "သုံးရောင်ခြယ်လေးနော် ... မောင်နမ်းချင်တယ်ကွာ ..." ရှက်လိုက်တာမောင်ရယ် ... ဘာသုံးရောင်ခြယ်လဲ ... မသိပါဘူး ... ကျွန်မ ဒီအရွယ်ထိ ... ကိုယ့်ဟာကိုယ် သေချာမကြည့်ဖူးတော့ ... မောင် ဘာပြောမှန်းနားမလည်ပါဘူး ...
"အာ ... ဟေ့အေး ... နမ်းရဘူးနော် ... မောင် ..." "ဟာ .... အား ... အား ... အား ... " မောင်လေ ... ကျွန်မရဲ့ ... ပန်းလေး အ၀ကို နမ်းလိုက်ပါတယ် ... မရွံဘူးလား မောင်ရယ် ... မောင့်ကိုလေ ...
မတားဆီးနိုင်တော့ဘူး ... အထိအတွေ့က ... အရမ်းခံရတယ် မောင်ရယ် ... မောင့်ရဲ့ လျှာဖျားလေးနဲ့ ... ကျွန်မ ... ပန်းလေးနုနုကို ... ထိလိုက်တာ ... အရမ်းကောင်းတာပဲရှင် ... ရင်ထဲမှာ ... ဗုံးပေါက်သလိုပဲ ... ၀ုန်းကနဲ ... သွေးတွေ ဆူကြွလာပါတယ် ... အို ... မောင်ရယ် ... ဟင့် ...
"အား ... အား ... အား ... ရှီး ... " ကျွန်မ ရူးပြီ ... မောင်ရယ် ... အသွေးအသားတွေက ... ပွက်ပွက်ဆူလောက်အောင် ... မောင်နမ်းတတ်တယ်ကွယ် ... မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေအောက်မှာ ... ကျွန်မလေ ... ဘယ်လိုနေရမလဲမသိတော့ပါဘူးရှင် ... ကောင်းလွန်းတော့ ခံရခက်တယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ ... မောင် ... ရင်သားလေးတွေကို နမ်းတုန်းကနဲ့ ... ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးရှင် ... အထိအတွေ့က ... ကျွန်မကိုလေ ...
ဟိုးမိုးကောင်းကင်ဆီ ... ခေါ်သွားပါတယ် ... အေးကနဲ သိမ့်ကနဲ ... မြင့်လိုက် နိမ့်လိုက်နဲ့ ... ရင်တုန်လွန်းလို့ ... ကျွန်မ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ... အတင်းဖိကိုက်ထားပြီး ... မောင့်အနမ်းတွေကို ... ခံနေရရှာတယ် ... နမ်းပါမောင်ရယ် ... နမ်းပါ ...
သိပ်ချစ်ရလွန်းတဲ့ ... ချစ်ဦးသူ မောင့်ကို ... အရာရာပေးဆပ်ထားပါတယ် ... မောင်လိုချင်တာ ယူပါလေ ... မောင်လေ ... ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက ... ပန်းနုရောင် ပန်းဖတ်လေး နှစ်ဖတ်ကို ... လျှာနဲ့ယက်လိုက်တယ် ... အာ ... ဟာ ... ကောင်းလိုက်တာ
မောင်ရယ် ... ကောင်းလိုက်တာ ... နူးညံ့တဲ့ ပန်းဖတ်လေးတွေကို ... မောင့်လျှာကြမ်းကြမ်းနဲ့ ... ယက်ပေးတော့ ... ကျွန်မလေ ... ကျွန်မ ... ရမက်တွေ ထန်ကုန်တာပေါ့ ... ဟိုးအရင်တုန်းက ... အပျိုလေးဆိုတော့ ... ကာမအရသာဆိုတာ ဘယ်သိပါ့မလဲရှင် ... မောင်နဲ့ လက်ထပ်မှ ... မောင့်အနမ်းတွေအောက်မှာ ... ဒီအရသာကို ... စသိလာပါတယ် ... ကာမဆန္ဒက ... ပြောမပြတတ်အောင် ... ထကြွနေလို့ ... ကျွန်မလေ ... မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး ... အတင်းပဲ ... ပန်းလေးကို
ကော့ကော့ပစ်လိုက်တယ် ... ကျွန်မတင်လေးတွေ ... မွေ့ယာကနေ လွတ်သွားလောက်အောင် ... ကော့ပစ်လိုက်တာ ... မောင် နမ်းတာ အရမ်းကောင်းလို့ရှင့် ... ရှက်ပေမယ့် မနေနိုင်တော့ ... မောင်ရယ် ... ပန်းလေးထဲက ... ယားလိုက်တာမှ ... အရမ်းပဲ ... အထဲကနေ ... မောင့်လျှာလေးများ ... တိုးဝင်လာမလား ... အတင်း ဖမ်းပြီး စုပ်နေတာ ... ရှက်လိုက်တာကွယ် ... မောင်ရယ် ... "အို ... အား ... အား ..." နမ်းတတ်လိုက်တာ မောင်ရယ် ... နမ်းတတ်လိုက်တာ ... ကျွန်မရဲ့ ... ငြီးသံတွေက ... ထိန်းမရအောင် ... ထွက်နေပါတယ် ... အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ... အတင်းဖိကြိတ်ထားပြီး ... မောင်ပေးတဲ့ချစ်အရသာက ... ကောင်းလွန်းတော့ ... ဖင်လေးကို ...
ကော့လိုက် ... စကောဝိုင်းလို ... ဝေ့ကနဲ ... ကော့လိုက်နဲ့ ... မောင်အ့နမ်းအောက်က ... လွတ်လေမလား ... ရုန်းကြည့်မပိါတယ် ... မောင်ကလည်း မောင်ပဲလေ ... ကျွန်မ အပေါ်ကို ကော့ပေးရင် ... မောင့်လျှာလေးက ... အပေါ်ကို လိုက်လာပါတယ် ...
အောက်ကိုကျသွားရင် ... အောက်ကို လိုက်လာတယ် ... ဘယ်ကိုဝိုက်ရင်လည်း ... ပါလာတာပဲ ... ကော်နဲ့များ ကပ်ထားသလား မောင်ရယ် ... ခွာမရတော့ဘူး ... "အို ... ဟင့် ... ဟင့် ... အရမ်းထိတယ် မောင်ရယ် ... တို့ မခံနိုင်ဘူး ... အား ရှီး ... အား ... အား ... ရှီး" မောင်လေ ... ကျွန်မ ရတာဖူးလေးကို ဘယ်လိုများတွေ့သွားလဲမသိပါဘူး ... အစေ့သေးသေးလေးကို ... အတင်းပဲ ဖိပြီးယက်တယ် ...
"ဟင့်အင်းကွယ် ... အို ... ရှီး ... မခံနိုင်တော့ဘူး ... မခံနိုင်တော့ဘူး ... တော်ပါတော့ မောင်ရယ် ... အိုး ... ဟာာ ... ဟာာာ" ကျွန်မ ခံရခက်မှန်းသိလေ ... မောင်ပိုနမ်းလေပဲ ... တားလို့လည်း မရတော့ဘူးလေ ... "အို ... မောင် ... တော် ... တော်ပြီနော် ... တုိ့ ... သေးထွက်တော့မယ် ..." "ဟိတ် .... ဖယ်ပါကွာ ... ဟင့် ... ဟင့် ..." ကျွန်မ ပန်းလေးထဲကလေ ... ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တော့ ... ယားလွန်းလို့ သေးထွက်ချင်သလို ... ဖြစ်လာပါတယ် ... မောင်ရယ် ... ဖယ်လိုက်ပါကွာ ... တော်ကြာ ... ရှူးရှူးတွေ ထွက်ကျကုန်မှ ... မောင့်မျက်နှာတွေ ပေကုန်အုံးမယ် ...
"မောင်ရေ ... အား ... အား ... အား ... မရတော့ဘူး ... တို့ ... မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ... ရှူရှူးတွေ ... ထွက်ကုန်ပြီ ... ထွက်ကုန်ပြီ ... ဟင့် ... ဟင့် ... ဟင့်် " ကျွန်မစိတ်တွေ ... ထိန်းမရအောင် ... ဟိုးအဝေးကြီးကို ပျံတက်သွားပါတယ် ... ထိပ်ဆုံးလည်းရောက်ရော ... ၀ုန်းကနဲ ... ပြုတ်ကျလာတာ ... ရင်ထဲ အေးကနဲ ... ဖြစ်သွားတာပဲရှင် ... ကောင်းလိုက်တာ ... သွေးကြောလေးတွေက ...
တဆစ်ဆစ်ယားနေတဲ့ ... ဝေဒနာလေး ... တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ... ပျောက်သွားတာ ... သိပ်ကောင်းတာပဲမောင်ရယ် ... မောင် ပေးတဲ့ ချစ်အရသာက ... တော်တော်ကောင်းတာပဲရှင် ... သိပ်ချစ်သွားပြီ ... မောင်ရယ် ... သိပ်ချစ်သွားပြီ ... "ဟင့် ... မောင် အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ ..." "အရမ်းကောင်းတယ်မှတ်လားဟင် ..."
"သိဘူးကွာ ... ရင်ထဲမှာ ... အရမ်းမောနေတာပဲ သိတယ် ..." ဟုတ်ပါတယ်ရှင် ... မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် ... ကျွန်မ ... ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ဖြစ်နေပြီး ... တကိုယ်လုံး ရှိသမျှအားတွေကို
... မောင် စုပ်ယူသွားပါတယ် ... သိပ်ဆိုးတာပဲ မောင်ရယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက ... အရည်တွေကို ... အတင်းပဲ စုပ်ယူပြီး ... မျိုချလိုက်တယ် ... မောင့်လျှာကြီးနဲ့ ... အတင်းပိတ်ထားပြီး ... အရည်တွေကို ... အကုန်ယက်ပစ်လိုက်ပါတယ် ... "မောင်ရယ် ... မရွံဘူးလားဟင် ..."
"မောင် ... သိပ်ချစ်တာ ယုံပြီလား ... မ ကို ချစ်လွန်းလို့ ... မ အရည်တွေကို ... မရွံပါဘူး ... ချိုတောင် ချိုသေးတယ် ..." "ဟင့် ... မောင်ရယ် ... အရမ်းအားနာတာပဲ ... ဘာလို့ အကုန်စုပ်ပစ်လိုက်တာလဲ ... မောင် အကုန်စုပ်ပစ်လိုက်တာ ... အားတောင်မရှိတော့ဘူး ... မောင်ရယ် ... တို့ကို ... ဖက်ထားပါလားဟင် ..." "မောင့်ကို ချစ်တယ်မှတ်လားဟင် ..."
"သိပ်ချစ်တာပေါ့ ... မောင်ရယ် ... သိပ်ချစ်တာပေါ့ ..." "မောင့်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ... မောင် အရမ်းချစ်ချင်လာပြီကွာ ... ဟိုဟာလေးကို ချွတ်လိုက်တော့နော် ..." "ခဏလေးပါ မောင်ရယ် ... တို့ အားမရှိလို့ ... ခဏလေး ... မှေးနေတယ် ..." "အင်း …"
မောင် ... ကျွန်မ နှဖူးလေးကို ... နမ်းလိုက်ပြီး ... အတွင်းခံလေးကို ... ချွတ်လိုက်သည် ... "အို ... မောင်နော် ... ဟင့်" ကျွန်မလေ ... ရှက်လွန်းလို့ ... အတွင်းခံလေးကို ... လိုက်ဆွဲနေမိပါတယ်ရှင် ... ရှက်လိုက်တာ အရမ်းပေါ့ ... အပျိုလေးဆိုတော့ ... မရဲဘူးရှင့် ... မောင်ကို့ သိပ်ချစ်ပေမယ့် ... တကယ်တမ်း ... လိုက်လျောဖို့ကျတော့ ... နှမြောနေမိသည် ... ကျွန်မရဲ့ ...
အပျိုစင်ပန်းဦးလေးကို ... မောင့်ကို ... ခူးခွင့်ပေးလိုက်ပေမယ့် ... ရှက်လိုက်တာရှင် ... မောင်လေ ... အားမရှိတဲ့ ... တို့ကို ... အနိုင်ကျင့်တယ် ... အတွင်းခံလေးက ... ပေါင်လေးတစ်လျှောက် ... လိပ်ပြီး ... ကျွတ်သွားတယ် ... "အရမ်း ... ချစ်တယ် ... မရယ် ... အရမ်းချစ်တယ် ..." မောင်လေ ... ကျွန်မ မျက်နှာကို ... အတင်းနမ်းတော့တာပဲရှင် ... လည်တိုင်လေးကို ... နမ်းတော့ ... ယားလွန်းလို့ ... အောက်က ... ဟောင်းလောင်း ဖြစ်နေတာ ... မေ့သွားတယ် ...
မောင်လေ ... သူ့အင်္ကျီတွေလည်း ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ... မောင် ဘောင်းဘီကိုချွတ်တော့ ... ကျွန်မ ... မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်တယ် ... မောင့်ရဲ့ ဟိုဟာကို ... မကြည့်ရဲဘူးရှင့် ... ရှက်လိုက်တာရှင် ... ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ခါမှ ... မနေဖူးပေမယ့် ... ဖိုမကိစ္စတွေကိုတော့ ... ကျွန်မ ... သိတန်သလောက် သိထားပါတယ် ... မောင့်ရဲ့ ... ပေါင်ကြားထဲက ပစ္စည်းနဲ့ ... ကျွန်မ
ပန်းလေးထဲကို ... ထည့်လိုက်ရင် ... အို ဆန့်ပါ့မလားရှင် ... တော်ကြာ မဆန့်လို့ ... ကွဲပြဲသွားမှရှင့် ... မသိတော့ပါဘူးရှင် ... မောင်ချစ်သမျှ ... လိုက်လျောလိုက်တော့မယ် ... ဟင့် ... "အို အို ..."
မောင်လေ ... ကျွန်မပေါင်ကို ကားလိုက်ပါတယ် ... ရှက်လိုက်တာ ... မောင်ရယ် ... ပေါင်လေးကို ... အတင်း ပြန်စိတယ် ... မောင်က ပြန်ကားတယ် ... ကျွန်မက ပြန်စိတယ် ... ဒီလိုကားလိုက် ... စိလိုက်နဲ့ ... ကျွန်မရင်တွေ တုန်လိုက်တာရှင် ...
နောက်ဆုံးတော့ ... မောင့်ကို အရှုံးပေးလိုက်ပါတယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မကို ... ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေက ... အရမ်းကို ... ရမက်ထန်နေပါတယ် ... သားကောင်ကို စားခါနီးကြည့်တဲ့ ... ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ အကြည့်မျိုးဆို ... ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် ...
ကျွန်မလေ ... မောင့်မျက်လုံးတွေကို ... ကြည့်ပြီး ... ကြောက်လာပါတယ် ... သူကတော့ ... ပျော်နေမှာပေါ့ ... ကျွန်မကတော့ ကြောက်နေပါတယ် ... မောင် သူ့အင်္ကျီတွေကို ... ချွတ်လိုက်ပါတယ် ... မောင့်ရဲ့ ဗလတောင့်တောင့် ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးက ...
ကျွန်မကို လှန့်နေတာလားဟင် ... မောင့်ရဲ့ဗိုက်မှာ ... ဗယ်လီတုံးလေးတွေက အစီအရီ ... ဟင့် ... ကြောက်လာပြီမောင်ရယ် ... ကျွန်မလေ ... ဆက်မကြည့်ရဲတော့ဘူး ... မောင် ဘောင်းဘီဇစ်ကို ကိုင်လိုက်တော့ ... မျက်စိလေးမှိတ်ပစ်လိုက်တယ် ...
ဒါပေမယ့် ... နားထဲမှာ ကြားလိုက်တာက ... ဇစ်ဖြုတ်တဲ့အသံလေး ... ဇွိကနဲ ကြားလိုက်ရတာ ... ရင်တုန်သွားတယ် ... ဟင့် ဟင့် ... ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀လေး ... အဆုံးသတ်မယ့်အချိန်ကို နီးလာပြီပေါ့ ... "မ ... ကြောက်နေတာလားဟင် " "အို ..." ကျွန်မလေ ... ဘာအသံမထွက်ရဲဘူး ... "မကြောက်နဲ့နော် ... မ ... မနာပါဘူး မရယ် ..." "ဟင့် ... ဟာ .... ဟာ ... ရှီး"
အိုး ... မောင်လေ ... သူ့ပစ္စည်းကြီးနဲ့ ... ကျွန်မပန်းလေးကို လာထိတယ် ... ကျွန်မ တကိုယ်လုံး တုန်သွားတာပဲရှင် ... မောင့်ရဲ့ ထိပ်ဖျားက ... နူးညံ့ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် မာတယ် ... မောင်လေ ... အရမ်းနူးညံ့တဲ့ ပန်းလေးအ၀ကို တေ့လိုက်ပါတယ် ... "ဟာ ... ဟင့်" အထိအတွေ့က မပြောပြတတ်အောင်ပဲရှင် ... ကျွန်မလေ ... ရှက်လည်းရှက် ... ကြောက်လည်း ကြောက်တော့ ...
ကျွန်မပန်းလေးကို ... အတင်းညှစ်ထားလိုက်ပါတယ် ... မောင်လေ ... တေ့သာတေ့ထားတယ် ... သွင်းမရဘူးရှင့် ... မောင် ... က စိတ်ကြီးတယ် ထင်တယ် ... အတင်းပဲ ... ဟိုထိုး ... ဒီထိုးလုပ်တယ် ... "အို ... မောင်နော် ... ဟင့်အင်းကွာ ... ဟင့်အင်း ..." "အို ... မောင် ... မောင့် ..."
မောင်လေ ... ကျွန်မပန်းလေးကို ... ထိုးလို့လည်းမရတော့ ... အပေါ်အောက် ... လျှောက်ပွတ်တယ်ရှင့် ... ခံရခက်လိုက်တာရှင် ... အို ... ဟင့် ... ကျွန်မ ပန်းဖူးလေးကို ... မောင့်ပစ္စည်းကြီးနဲ့ ... လာလာထိတယ် ... အား ... ခံရခက်လိုက်တာရှင် ...
ပန်းလေးက အထည့်သာမခံတာ ... အထဲမှာ ... အတင်းညှစ်ညှစ်ေနပြီး ... ပန်းဝတ်ရည်တွေက ... တစိမ့်စိမ့် ယိုကျနေပါတယ် ... ပန်းလေးထဲကလည်း ... အရမ်းယားလာပါတယ် ... ချစ်ချင်လည်း ... ချစ်လိုက်ပါတော့ မောင်ရယ် ... ကျွန်မလေ ... ပေါင်လေးကို ... ပိုပြီး ကားပေးလိုက်တယ် ... မောင်လေ ... နည်းနည်းလေး ဟပေးတာနဲ့ ... အတင်းပဲ ... ထိုးထည့်တယ် ... "အား ... နာတယ် ... မောင်ရယ် ... နာတယ်..." ပြွတ်ကနဲ ... မောင့်ထိပ်ဖျားလေး ... ၀င်လာပါတယ် ... ကြီးလိုက်တာရှင် ... ပန်းလေးက ကျဉ်းတော့ ... နာတယ်ရှင့် ...
"ဟား ... မရယ် ... ၀င်သွားပြီ ... ၀င်သွားပြီ" မောင်ရဲ့ ... နှစ်ထောင်းအားရသံက ... နှစ်ကိုယ်ကြားပြောတာဆိုတော့ ... ကျွန်မကို ... ပိုပြီး ရမက်ထန်စေပါတယ် ... "အား ... မောင် ... မောင် ... ပြန်ထုတ်ကွာ ... ထပ်မထည့်နဲ့တော့ ... ဟင့် ... နာတယ် ... နာတယ် ... ဟီး" မောင်လေ ... ကျွန်မကို ... မညှာတော့ဘူး ... သူ့ဟာက ... တထစ်ချင်း ၀င်ချလာတာ ... အရမ်းကျဉ်းတဲ့ ... ပန်းလေးထဲက
အသားစိုင်တွေကို ... ထိုးခွဲပြီး ... ၀င်လာပါတယ် ... ကြပ်လိုက်တာရှင် ... ကြပ်လိုက်တာ ... နာလိုက်တာလည်း ... အရမ်းပဲ ... အသားနုလေးတွေကို ... ပွတ်တိုက်သွားတဲ့ ... မောင့်ရဲ့ ဟာက ... သံချောင်းလောက်ကို မာလိုက်တာရှင် ... "အား ... တော်ပါတော့ ... မောင်ရယ် ... တို့မခံနိုင်ဘူး ... ဟင့် ... အရမ်းနာတယ်ကွာ ..." "ခဏလေးပါ ... မရယ် ... ခဏလေးပါ ... "
ကျွန်မလေ ... ဇောချွေးလေးတွေ ပြန်လာပါတယ် ... နာလွန်းတော့ အောက်ကနေ ... လူးလှိမ့်နေတာပဲရှင် ... မောင် ကျွန်မ ... ရင်သားတွေကို ... လာနမ်းတယ် ... လည်တိုင်လေးတွေကို ... နမ်းတယ် ... လက်လေးက ... ရင်သားတွေကို ... နယ်ပေးတယ် ... အို ... ဟင့် ... အောက်ကလည်း နာ ... အပေါ်ကလည်း ယား ... ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ... မောင့်ရင်ခွင်အောက်မှာ ...
လူးလိမ့်နေတာပဲရှင် ... မောင်လေ ... ကျွန်မ ရင်သားထိပ်ဖျားလေးကို ... ညှစ်ပြီး ချေပေးပါတယ် ... အို ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ... နာကျင်တာတွေ မေ့ပျောက်သွားအောင် ... မောင်လုပ်တတ်တယ်နော် ... စောက်ခေါင်းလေးထဲ နစ်ဝင်နေတဲ့ ...
မောင့်ဟာကြီးကိုတောင်မေ့သွားတယ် ... မောင်လေ ... သူ့ဟာကို ... အထဲမှာ မွှေနေတယ် ... ထက်အောက် ဘယ်ညာ ...
ဖမ်းမရ ... ညှစ်မရအောင် ... မွှေ့ယမ်းနေတော့ ... ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ထူပူသွားတာပဲရှင် ... ရင်ထဲမှာလည်း ... လှိုက်ကနဲ ဖိုကနဲ ... အို ... မောင်ရယ် ... ချစ်တယ် မောင်ရယ် ... ချစ်တယ် ... မောင်လေ ... သူ့ခါးကို ဆတ်ကနဲ ဖိချပစ်လိုက်တော့ ... မောင်ဒု့တ်က ... ပန်းလေးထဲ ... အတင်းဝင်ချလာပါတယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက ... တစ်ခုခုကို ... ထိုးခွဲပစ်လိုက်တယ် ... ဆစ်ကနဲ ... နာကျင်မှုက ... အသည်းခိုက်အောင် ... နာလိုက်တာရှင် ... "အား ... နာတယ် ... နာတယ် ... ဟင့် ... ဟီး ... မောင် အရမ်းရက်စက်တယ်"
"အရမ်းနာသွားလား မရယ် ... မငိုနဲ့နော် ... တိတ် တိတ် ... မ အပျိုမြှေးလေး ပေါက်သွားပြီ" "အို ... ဟင့် ... ဟီး ..." ကျွန်မ ... အပျိုမြှေးလေး ပေါက်သွားပြီတဲ့ ... ဟင့် ... နာလိုက်တာရှင် ... ဒါဆို ... ကျွန်မ ... အပျိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ ...
မောင်လေ ... ကျွန်မ အပျိုပန်းလေးကို ... ဆွတ်ခူးသွားပြီ ... နာလွန်းလို့ ... ရုန်းကန်ပစ်နေတဲ့ ကျွန်မကို ... အနမ်းတွေ တရစပ် ပေးတော့တာပဲ ... ကျွန်မလေ ... ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ... မျက်ရည်လေးတွေ စီးကျလာပါတယ် ... "မငိုပါနဲ့ ... မ ရယ် ... မောင်က ချစ်လွန်းလို့ပါ" "ဟင့် ဟင့် ..."
ငိုနေတဲ့ ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းရင်း ... မောင်လေ ... အဆုံးထိထိုးထည့်ထားတဲ့ ... မောင့်ဒုတ်ကို ... ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ် ...
"ဟင့် ... ဟင့် ... ရှီး" ကျွန်မလေ ... မျက်စိမှိတ်ထားရာကနေ ... အတင်းပဲ ထကြည့်ပါတယ် ... မောင် မကောင်းဘူး ... ရက်စက်တယ် ... ကျွန်မပန်းလေးထဲက ... ဆွဲထုတ်လာတဲ့ မောင်ဒု့တ် ... နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး ... ကျွန်မ
လက်ကောက်ဝတ်နီးပါးလောက်ရှိတာကြီးကို ... မောင် ထည့်ရက်တယ် ... ဟင့် ... ဒီလောက်ကြပ်နေတဲ့ ... ပန်းလေးထဲ ထည့်တော့ ... အထဲမှာ ကွဲပြဲကုန်ပြီလား မသိပါဘူး ... ဟင် ... မောင်ဒု့တ်မှာ ... သွေးတွေနဲ့ ... "အို ... သွေးတွေနဲ့ ... မောင် "
"အပျိုမြှေးပေါက်သွားတာ ... မ ရဲ့ ... စိတ်မပူပါနဲ့ ... အစမို့ နည်းနည်းလေး နာတာပါ ..." "သွားပါ ... မောင် အရမ်းရက်စက်တယ် ... ဒီမှာ သွေးတွေ ထွက်နေပြီ ..." ပန်းလေးထဲက ... အရည်တွေနဲ့ အတူတူ သွေးတွေ ထွက်လာပါတယ် ... "လာပါ ... မ ရယ် ... စိတ်မဆိုးရဘူးနော် ... ဆက်ချစ်ချင်တယ် မရယ် ... လာပါ ..." "အို ... ဟင့်အင်း ... ဟင့်အင်း ..."
မောင် အရမ်းဆိုးတယ် ... ကျွန်မကိုလေ ... အတင်း တွန်းချပြီး ... ပန်းလေးထဲကို ... မောင့်ဒုတ်ကြီးနဲ့ ... တေ့ပြီး ... ဆောင့်ချပစ်လိုက်ပါတယ် ... "အား ... နာတယ် ... နာတယ် ... ဟင့်" မောင်က ... အတင်းပဲ ... ကျွန်မကို မညှာဘူး ... စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတဲ့ ... ပန်းလေးက ... ဒေါသတကြီး ... မောင်ဒု့တ်ကို ... ညှစ်ပစ်လိုက်တယ် ... ကဲ ... မှတ်ပြီလား ... မောင်ရေ ...
"ဟာ ... ဟာ ... အရမ်းညှစ်တယ် ... မရယ် ... အရမ်းညှစ်ထားတယ် ..." ဒီတစ်ခါ ... အော်ရတာက ... မောင်လေ ... ကောင်းတယ် မှတ်ပြီလား ... သူများကို ... မညှာမတာ ... သွေးထွက်အောင်လုပ်တဲ့ မောင် ... ကျွန်မလည်း ... အရမ်းနာတာပဲ ... နာတာပျောက်သွားအောင် ... အတင်းညှစ်ထားတော့ ... မောင် လုပ်မရတော့ဘူးပေါ့ ... မောင်လေ ... ကျွန်မ ဒီလို ညှစ်နေတာကို ... အရမ်းဖီးတွေ့နေတယ်ထင်ပါရဲ့ ... အတင်းပဲ ... ဆွဲထုတ်တယ် ... ကျွန်မက အတင်းညှစ်ထားတယ် ... ဟင့် ... ဟင့် ... ပန်းလေးထဲက ... မောင်ဒု့တ်ကြီးက ... ပြန်ထွက်သွားပြီ ... ရင်ထဲမှာ ဟာကနဲ
ဖြစ်သွားတယ် ... ချက်ခြင်းပဲ ... မောင် ပြန်ထည့်တယ် ... ဟာ ... အား အား ... ဆီးခုံနှစ်ခု ... ဂဟေဆက်သွားတဲ့အထိ ... မောင်ထိုးထည့်တယ် ... မောင်ဒု့တ်က ရှည်လိုက်တာရှင် ... ကျွန်မ သားအိမ်ကို ... ဒိန်းကနဲ လာဆောင့်တဲ့အထိ ...
ထည့်ပစ်လိုက်တော့ ... မျက်လုံးတွေ ပြာသွားတာပဲ ... ဒီလိုနဲ့ ... အ၀င်အထွက်တွေက ... တဖြေးဖြေး မြန်လာပါတယ် ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ... အပျိုမြှေးပေါက်သွားတဲ့ နာကျင်ခံစားမှုတွေ ... ပျောက်သွားပြီး ... ကျွန်မစိတ်တွေ ... ချစ်ရမက်ခိုး ဝေနေပါတယ် ... မောင်ဒု့တ် ၀င်လာရင် ... ခါးလေးကို ယမ်းခါလိုက် ... ပြန်ထွက်ခါနီး ... ညှစ်ထားလိုက်နဲ့ ... ဖီလင်တွေ
တက်လာပါတယ် ... အော် ... ဒါကြောင့်လည်း ... အိမ်ထောင်ပြုကြတာကိုး ... ဒီအရသာက ... ဘာနဲ့မှကိုမတူတာပဲရှင် ...
မောင်လေ ... ကျွန်မ ဂျိုင်းနှစဖ်က်အောက်ကို ... လက်ထည့်လိုက်ပါတယ် ... လျှိုပြီး ... ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ... အတင်းဆုပ်ပြီး ... ဖိဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် ... "ဗြစ် ... ဗြစ် ... စွတ် ... စွိ ... အင့် ... အီး ... ဟင့် ... ဟင့် ... အား ... အား "
အရမ်းပဲရှင် ... နားထင်တွေ ပူထူသွားအောင် ... ဆက်တိုက် ... ဆောင့်ပစ်နေတယ် ... မောင်လေ ... အတင်းပဲ ဆောင့်တော့ ... ကျွန်မ ရုန်းမရတော့ဘူး ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ... ကောင်းလိုက်တာ ... ငြီးသံလေးက ... အခန်းထဲမှာ ကျယ်လာတော့ ...
အတင်း နှုတ်ခမ်းကို ... ကိုက်လိုက်ပြီး ... အောက်က ... တင်သားကို ... ကော့ပစ်လိုက်တယ် ... ဆောင့်ပေတော့ ... မောင်ရေ ... ဆောင့် ... မောင်ချစ်သမျှ ... တို့ လိုက်လျောမယ် ... မောင်ချစ်လို့ အသက်ထွက်ရင်လည်း ထွက်ပါစေတော့ ...
မတတ်နိုင်တော့ဘူး ... မောင့် ဆောင့်ချက်တွေက ... မှန်မှန်နဲ့ အားပါတော့ ... နည်းနည်းတော့ အောင့်တယ်ရှင့် ... ................................
မောင့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့် ... မွေ့ယာထူထူပေါ်က ... ပြန်ကန်ထွက်လာတဲ့ ကျွန်မတင်သားတွေကို ... မွေ့ယာထဲ တင်ပါးကြီး မြုပ်သွားအောင် ဆောင့်ချလိုက်နဲ့ ... မောင်အချစ်ကြမ်းနေပါတယ် ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ...
နာနေပေမယ့် ... မောင်ချစ်တာ အရမ်းကောင်းတယ် ... အီစိမ့်နေအောင် ... ကောင်းတဲ့ မောင့်ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ ... ကျွန်မပန်းလေး ... ကွဲချင်ကွဲပလေ့စေတော့ရှင် ... မောင်ဆောင့်တာ ပိုပြီး ထိအောင် ... အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးနေမိတယ် ... ကော့ပေးတော့လေ ... မောင့်ဆောင်ချ့က်တွေက ပိုပြီးထိတယ်ရှင့် ... ဒါပေမယ့် ကျေနပ်ပါတယ် ... နာပေမယ့်
အရမ်းကောင်းတော့ ... ခြေထောက်တွေကို ... လေထဲမှာ ဟိုကန်ဒီကန် ကန်မိပါတယ် ... နောက်ဆုံး သုံးချက်လောက်မှာ ... မခံနိုင်တော့ဘူးရှင့် ... အ၀င်အထွက်ကြမ်းနေတဲ့ ... မောင့်ဒုတ်ကြီး ... တုံ့ကနဲ ဖြစ်သွားအောင် ... ညှစ်ပစ်လိုက်တယ် ... ကျွန်မလေ ... အရမ်းထန်နေတော့ ... ခါးလေးကိုပါ လိမ်ပစ်လိုက်တယ် ... "အား ... ဟင့် ... ဟင့် ... ရှီး ... မောင် ... မောင် " ကျွန်မလေ ... မောင့်နာမည်ကို အတင်းခေါ်ရင်း ... ပန်းလေးထဲက ... အရမ်းယားလာပြီး ... ပြွတ်ကနဲ ... ချစ်ဝတ်ရည်တွေ
ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ... ကောင်းလိုက်တာ ... ကာမအရသာရဲ့ အဆုံးသတ် ခံစားမှုက ... ကျွန်မရင်တွေ တငြိမ့်ငြိမ့်ပါပဲရှင် ... မောင့်ကို ... အတင်းဖက်ထားရင်း ... မော့ကြည့်လိုက်တော့လေ ... မောင့်မျက်နှာမှာ ချွေးတွေ ပြန်နေတယ် ... အို ... မောင်ရယ် ... ချွေးထွက်ရလောက်အောင် ... ချစ်ရသလားရှင် ... ကျွန်မလေ ... မောင့် မျက်နှာပေါ်က ... ချွေးလေးတွေကို ... သုတ်ပေးလိုက်ပြီး ... "မောင်ရယ် ... အရမ်းကောင်းတယ်ကွယ် ..."
"ဟုတ်တယ် ... မရယ် ... အရမ်းကောင်းတယ် ... ဒါပေမယ့် ... မောင် မပြီးသေးဘူး ..." "အို ..." ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် ... ကျွန်မ အရည်တွေ ထွက်တာ ခဏခဏရှင့် ... မောင်ကတော့ ပြီးသေးဘူးတဲ့ ... "မောင့် ... အရမ်းမောနေရင် ... ခဏလောက်နားပါလားကွယ်"
"ဟင့်အင်း ... မ ရဲ့ ... အဖုတ်က ... အရမ်းချလို့ကောင်းတယ် ..." "အို ... မောင်ကလည်း ..." ကျွန်မလေ ... မောင့်ကို သိပ်ချစ်ပေမယ့် ... ဒီလိုမျိုး စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေကိုတော့ နားရှက်တယ်ရှင့် ... ဒါပေမယ့် ... မောင် မပြီးသေးတာကို ... အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်ရှင့် ... မောင့်ကိုလည်း ... ကျွန်မလို ... ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုပေးချင်တယ် ...
ကျွန်မလေ ... မောင့်ကို သိပ်ချစ်သွားတော့ ... အတင်းပဲ အောက်ကနေ ... ကော့ကော့ပေးတယ် ... ညှစ်ပေးတယ် ... မောင်လေ ... အရမ်းထန်လာတော့ ... ကျွန်မ ခါးလေးကို အတင်းမပြီး ... ပန်းလေးထဲကို ... အတင်းဆောင့်ချနေတော့တာပဲရှင် ... ကျွန်မလေ ... စက်သေနတ်ပစ်သလို မောင့်အချစ်တွေကြောင့် ... ဗလုံးဗထွေးနဲ့ ... ငြီးတွားနေပါတယ် ... "အား ... ဟာ ... ဟာ ... မ ... မောင် ... ပြီးတော့မယ် ... ပြီးတော့မယ် ..."
အ၀င်အထွက်တွေက ... မြန်လွန်းလို့ ... ကျွန်မ ပန်းလေးကလည်း ... မညှစ်နိုင်တော့ဘူးရှင် ... ခါးလေးကို ကော့ထားတော့ ... ပန်းလေးက ... ပိုဟပေးနေသလိုနဲ့ ... အရည်တွေ ရွှဲနေတော့ ... မောင် ၀င်သမျှ ထွက်သမျှ ... အဆင်ချောနေတာပေါ့ရှင် ... မောင်လေ ... နောက်ဆုံး အချက်မှာ ... အတင်းပဲ ... ဆောင့်ချလိုက်တာ ... ကျွန်မ သားအိမ်ထဲထိ ... သူ့ထိပ်ဖျား ၀င်ချလာပါတယ် ... ဖွတ်ကနဲ ... ၀င်သွားတဲ့ ... ခံစားချက်က ... ဒီတသက်မမေ့နိုင်တော့ပါဘူး ... "အား ... နာတယ် ... မောင် ... မောင် ..."
"ရှီး ... ပြီးပြီ ... မရေ ... ပြီးပြီ ... ရှီး ... ကောင်းလိုက်တာ မရယ် ... ကောင်းလိုက်တာ" ဟွန့် ... မောင်လေ ... တဇတ်ဇတ်နဲ့ တကိုယ်လုံးတုန်ပြီး ... အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်&# ဟွန့် ... မောင်လေ ... တဇတ်ဇတ်နဲ့ တကိုယ်လုံးတုန်ပြီး ... အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် ... အားရလိုက်တာရှင် ... မောင်လေ ... သူ့ဒုတ်ထဲက ... ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ... အရည်တွေက ... မီးသတ်ပိုက်လိုပဲ ... ပြင်းလိုက်တာ ... ပြွတ်ကနဲ ... ကျွန်မ ပန်းလေးကို .. နွေးသွားအောင် ... ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တာ ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ကောင်းလိုက်တာ ... မောင်လေ ...
အရည်တွေလည်း ထွက်ပြီးသွားရော ... ကျွန်မဘေးမှာ ... လှဲချပြီး ... မောနေတယ် ... ကျွန်မလေ ... မောင့် လက်မောင်းပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးပြီး ... မောင့်ကို ဖက်ထားရင်း ...
"မောင် ... အရမ်းမောနေပြီမှတ်လားဟင်" "မောတော့ မောတာပေါ့ ... မ ရယ် ... ဒါပေမယ့် မမောဘူး" "တို့ကို ... ချစ်တယ်မှတ်လားဟင်"
"ချစ်တာပေါ့ မရယ် ... ချစ်တာပေါ့"
"တို့လည်း မောင့်ကို ... အရမ်းချစ်တယ်ကွယ် ... မောင်က ဆိုးတယ်နော်" "အန် ... ဘာကို ဆိုးတာလဲ မကလဲ"
"တုိ့ကို သွေးထွက်အောင် ... လုပ်တယ် အရမ်းနာအောင်လုပ်တယ်" "ဟား ဟား ... မကလည်း ကလေးကျနေတာပဲ ... မက အပျိုလေးလေ ... ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ သွေးထွက်မှာပေါ့ ... အရမ်းနာသွားလားဟင်"
"နာတာပေါ့ မောင်ရယ် ... အသည်းခိုက်အောင် နာတာပေါ့" "နာပြီးတော့ ... ကောင်းတယ်မှတ်လားဟင်"
"ပြောမပြတတ်အောင် ... အရမ်းကောင်းတယ် ... ရွှတ်" ကျွန်မလေ ... မောင့်ကို အရမ်းချစ်မိသွားလို့ အသဲယားလွန်းလို့ ... အနမ်းတပွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ... မောင်လည်း ကျွန်မကို ပြန်နမ်းပါတယ် ... ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင်ပန်းလေး မောင်ခူးသွားပြီးနောက် ... နဲနဲတော့ ရဲလာပါတယ် ... သိပ်ချစ်ရတဲ့ မောင်နဲ့ ချစ်ရတာ သိပ်မ၀သေးပါဘူး ... တခါမှ မကြုံဖူးသေးတဲ့ ကာမအရသာကို ... ကျကျနန ခံစားလိုက်ရတော့ ... ရင်ထဲမှာ ဆန္ဒတွေက ပွက်ပွက်ဆူနေပါတယ် ... မောင် ချစ်ချင်ရင် ဆက်ချစ်လို့ရပါသေးတယ် ... မောင်ရယ် ... "မ ... ထပ်ချစ်ချင်သေးတယ်ဗျာ" "အို ... မောင်နော်"
"မ ... အဖုတ်က ... အရမ်းကြပ်တယ်နော်" "ဟေ့အေးနော် ... မောင် ... ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ ပြောနဲ့ ..."
"မရဘူးကွာ ... မနဲ့ မောင်က ... လင်မယားတွေ ဖြစ်နေပြီပဲဟာကို" "ဟေ့အေးနော် ... တို့ နားရှက်တယ် ..."
"မရှက်ပါနဲ့ မ ရယ် ... မ အဖုတ်လေးကို ... ဖြဲပေးထားနော်"
"ဟေ့အေး ... ဟေ့အေး" ကျွန်မလေ ... မောင့်အချစ်ကြမ်းကြမ်းတွေ လက်ခံပြီးပြီဆိုပေမယ့် ... အဲဒီလို လုပ်ပေးရမှာတော့ ရှက်မိပါတယ် ... မောင့်ကို ချစ်တော့လေ ... ရှက်ပေမယ့် ... ပေါင်လေးကိုသာ ကားပေးလိုက်တယ် ... မောင်ကလည်း ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး ... မောင်လေ ... အရည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ ကျွန်မပန်းလေးကို ... မတ်မတ်မောမောကြည့်ပြီး ... မောင့်ဟာကြီးနဲ့ ... တေ့လိုက်ပါတယ် ... "ဟာာာာာာာ" ငြီးသံလေးကို မတားဆီးနိုင်ခင် ... ပါးစပ်ဖျားက ထွက်သွားပါတယ် ... မောင့်ဟာက ... ကြီးကို ကြီးတာရှင့် ... တခါအချစ်ခံပြီးပြီဆိုပေမယ့် ... ကျွန်မပန်းလေးက ... ကျဉ်းကြပ်နေဆဲပါ ... မောင် ထိုးထည့်လိုက်တော့ ...
အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ... အတင်းကိုက်ထားရင်း ... မောင့်ကို တအားဖက်ထားလိုက်တယ် ... နာလိုက်တာ မောင်ရယ် ... အရည်တွေကြောင့် ... အ၀င်ချောပေမယ့် ... စပ်ဖျင်းဖျင်း ဒဏ်ရာက ... နာလိုက်တာရှင် ... မောင်လေ ... ကျွန်မကို ... နှစ်သိမ့်တဲ့ အနေနဲ့ ... အနမ်းတွေ လျှောက်ပေးနေတယ် ... တော်ပါ မောင်ရယ် ... လူကို ညာပြီး ... အရမ်းလုပ်တယ် .... ဟင့် ... ကျွန်မလေ .. ပေါင်တွေကို ... အတင်းကားပေးလိုက်ပါတယ် ... မဆန့်မပြဲ ၀င်ချလာတဲ့ ... မောင့်ပစ္စည်းကို ... မခံနိုင်ဘူးရှင့် ... မောင်က တအားစိတ်ထန်နေပြီနဲ့ တူပါရဲ့ ... ကျွန်မကို ဖက်ထားရာကနေ ... နည်းနည်းထပြီး ... ကျွန်မ ပေါင်နှစ်ေချာင်းကို ... ပိုကားပစ်လိုက်ပြီး ... ဖိချလိုက်ပါတယ် ... "ဟာာာာာာာ ... နာတယ် ... မောင် ... မောင်" ကျွန်မပုံစံက ... ပက်လက်ကလေး ... ဖြစ်နေပြီး ... ခြေထောက်တွေက ... ဖားလေးလို ကားကားလေး ဖြစ်နေပါတယ် ... ကျွန်မဖင်သားကြီးတွေက ... အတင်းကော့ပေးနေသလိုဖြစ်နေတော့ ... ပိုထိတာပေါ့ရှင် ... အစ တချက် နှစ်ချက် ...
ဖြေးဖြေးလုပ်ပေမယ့် ... နောက်ပိုင်း ... မောင် ကြမ်းတော့တာပါပဲ ... သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ အနီးကပ် ဆောင့်ချက်တွေက ... ကျွန်မ စိတ်တွေ ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်အောင် ... ပြင်းထန်လွန်းပါတယ်ရှင် ... မောင့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက ... ကျွန်မ ပန်းလေးကို နာကျင်စေတယ်ဆိုပေမယ့် ... နာကျင်ခြင်းနဲ့ အတူ ခံစားရတဲ့ ... အရသာလေးကို ... တဖြေးဖြေးနဲ့ နှစ်သက်လာပါတယ် ...
မောင့်ရဲ့ အနီးကပ်ဆောင့်ချက်တွေကို ... ကျွန်မလေ ... ကောင်းလွန်းလို့ အောက်ကနေ ပြန်ပြန်ပြီး ပင့်တင်ပေးပစ်လိုက်တယ် ... မောင်လည်း ကျွန်မလို ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်လာလို့ နေမှာပေါ့ ... ပါးစပ်ထဲက ငြီးတွားသံတွေ ထွက်လာပါတယ် ...
တို့လုပ်ပေးတာ ... ကောင်းရဲ့လား ... မောင်ရယ် ... ကျွန်မလေ ... မောင့်လည်ပင်းကို အောက်ကနေ အတင်းဖက်ထားရင်း ... ကျွန်မတင်ဆိုင်ကြီးတွေကို ... မွေ့ယာနဲ့ လွတ်တဲ့အထိ ... ကော့ကော့ပေးလိုက်တယ် ... မောင်လေ ... သဘောတွေ ကျလွန်းလို့ ... အားကုန်ဆောင့်တော့တာပဲ ... "အို ... ဟာာာာာ .... ဟာာာာာ" "ဟင့် ... ထိတယ် ... မောင်ရယ် ... အရမ်းပဲ" မောင် နည်းနည်းမောလာလို့ ထင်ပါရဲ့ ... ကျွန်မကိုယ်ပေါ်ကို နည်းနည်း ပိကျလာပြီး ... ဆက်တိုက်ဆောင့်ပါတယ် ... မောင့်ရဲ့ ဒုတ်က ... ကျွန်မပန်းဖူးလေးကို ... ပွတ်ပွတ်ဆွဲသွားတာများရှင် ... ကောင်းလိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့ ... အသဲထဲမှာ
ပြောင်းဆန်သွားတာပဲ ... မောင်လေ ... အားတက်လာလို့ထင်ပါရဲ့ ... ကျွန်မ ရင်နှစ်မွှာ ကို ... အတင်းနယ်တော့တာပဲ ... "အာ ... ဟာာာ .... ဟာာာ"
"နာတယ် ... မောင်ရယ် ..." "တော်ပါတော့ ... ဟင့် ... ဟင့် ..."
ပါးစပ်က တော်ပါတော့ဆိုပေမယ့် ... အောက်ကနေ ... အတင်းကော့ကော့ပေးနေတာ ... ကောင်းလွန်းလို့ပါရှင် ... မောင် ... ကျွန်မ ရင်သားထိပ်ဖျားလေးကို ... ဖိပြီး ချေတော့ ... မခံနိုင်တော့ဘူး ... စိတ်တွေ အရမ်းထန်လာပြီး ... သွေးတွေက ပွက်ပွက်ဆူမတတ် ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ ... ကျွန်မလေ ... အတင်းအော်ရင်း ... ဘယ်လိုဘယ်လို ... မောင့်ပေါ်ကို ရောက်သွားမှန်းမသိပါဘူး ... မောင် တအားလည်တယ် ... ကျွန်မကိုယ်လေးကို ... အတင်းဖက်ထားပြီး ... ဆွဲလှည့်လိုက်တော့ ... မောင်က အောက်မှာ ...
ကျွန်မက အပေါ်မှာ ... ရှက်လိုက်တာရှင် ... ပထမဆုံး စချစ်ကြတဲ့နေ့မှာ ... မောင်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မကို ချစ်နေတော့တာပဲ ... ချစ်ပါမောင်ရယ် ချစ်ပါ ... မောင် ချစ်သမျှကို လိုက်လျောဖို့ အသင်ပ့ါပဲ ... မောင့်ပေါ်မှာ ကျွန်မ ရောက်တော့လေ ... ခံစားချက်က တမျိုးကြီးပဲရှင့် ... အောက်ကနေ ထောင်ပြီး တင်းမာနေတဲ့ မောင့်ဒုတ်ကြီးက ... ပိုကြီးလာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ် ...
အတင်းကားထားပေမယ့် ... မရဘူးရှင့် ... ကျွန်မပန်းလေးက ... ပိုကြပ်သွားလိုနဲ့ ... မောင့်ဟာကို အတင်းညှစ်ထားပစ်လိုက်တယ်
... မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ... လှဲပြီး မှီနေတဲ့ ကျွန်မကို ... မတ်မတ်လေးဖြစ်သွားအောင် ... မောင် တွန်းလိုက်ပြီး ... ခါးကို ကိုက်ကာ ... ဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်နည်းလေး သင်ပေးပါတယ် ... ကျွန်မ သဘောပေါက်ပါတယ် ... မောင်အ့ကြိုက်လိုက်လျောဖို့ ဖြေးဖြေးလေး ... ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ... ကောင်းလိုက်တာ ... အောက်ကနေ ... ဒုံးပျံလို ထောင်မတ်နေတဲ့
မောင်ဒု့တ်ကို ... အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ရတာ သိပ်တော့ မသက်သာလှဘူးရှင့် ... တချက်တချက် ... ကျွန်မ သားအိမ်ကို
လာလာဆောင့်တာ အောင့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် ... ဒါပေမယ့် ကောင်းလွန်းလို့ ... သိပ်ကြာကြာ မဆောင့်နိုင်ပါဘူး ... စိတ်ထင် လေးငါးဆယ်ခါလောက်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ... မရတော့ဘူး ... ပန်းလေးထဲက ... ၀တ်ရည်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ အတူ ... ကျွန်မ အော်ငြီးပြီး ... အရည်တွေ ပြွတ်ကနဲ ထွက်သွားပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... တကိုယ်လုံး အားယုတ်သွားသလို ဖြစ်ပြီး ...
နည်းနည်းတော့ အိပ်ချင်လာပါတယ် ... မောင် ချစ်လို့ မ၀သေးဘူးဆိုတာ ... ကျွန်မသိပါတယ် ... မောင့်ကို ကျွန်မ ခေါင်းနဲ့ ဝှေ့ပြီး ... မှီအိပ်နေရင်း ... အပေါ်ကနေ ... ဖြေးဖြေးလေး ဆောင့်ပေးပါတယ် ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ... ပန်းလေးထဲကို ၀င်နေတဲ့ မောင်ဒု့တ်က ... သံချောင်းကျနေတာပဲရှင် ... မာပြီးတောင့်တင်းနေတဲ့ ... မောင့်ဒုတ်က ကျွန်မ ပန်းဖူးလေးကို
ခပ်ပြင်းပြင်းပွတ်ဆွဲတာများ ... တချက်တချက် ဆွေမျိုးမေ့သွားလောက်တယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မခါးလေးကို ကိုင်ပြီး ... စကောဝိုင်းလို မွှေခိုင်းတယ် ... စိတ်ချ မောင်ရေ ... မောင်အ့ကြိုက် ... ကျွန်မဖင်လေးကို အနောက်ကို အစွမ်းကုန်ကော့ထားရင်း
... စကောဝိုင်းလို မွှေပေးလိုက်တယ် ... အား .... ဟာာာာာ ... ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် ... တို့ သိပ်မလုပ်တတ်သေးပေမယ့် ... မောင်ကြိုက်မယ် ထင်ပါတယ် ... ကြပ်စီးနေတဲ့ ကျွန်မပန်းလေးထဲမှာ ... မောင့်ဒုတ်က ... အသားနုလေးတွေကို ... အီစိမ့်လောက်အောင် ... ပွတ်ပွတ်ဆွဲနေတာ ... ကောင်းလိုက်တာရှင် ...
ကျွန်မ စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင် ... ကောင်းလွန်းလို့ ... မောင်အ့ပေါ်မှာ ... ခပ်ပြင်းပြင်း အဆက်မပြတ်ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ... မောင်လေ ... ရေနစ်တဲ့လူလိုပဲ ... အတင်း ... ခေါင်းအုံးကို ဆွဲလိုက် ... မွေ့ယာခင်းကို ဆွဲလိုက်နဲ့ ... ဆောက်တည်ရာမရဘူး ဖြစ်နေတယ် ... ဟား ဟား ... မှတ်ပြီလား မောင် ... သူ့အလှည့်တုန်းက ... အသက်ရှူလို့ မရအောင် ... လုပ်ခဲ့တာလေ ... အခု တို့အလှည့်ရောက်တော့ ... မောင် အသက်ရှူမ၀တော့ဘူး မှတ်လား ... ကျွန်မလေ ... မြင်းစီးသလို ... ဖင်ကို အနောက်ကို
ကော့ထားလိုက် ... သိမ့်ကနဲ အပေါ်ကို ရောက်သွားလိုက် ... ပြန်ပြုတ်ကျလာလိုက်နဲ့ ... ပြောမပြတတ်အောင် ... ရမက်ခိုးတွေ ဝေနေပါတယ် ... ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မလေ ... ဘာမှ မသိချင်တော့ဘူး ... မောင့်ကို ... အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်က ... မောင်ဒု့တ်ကို ... ညှစ်ထားတဲ့ ပန်းလေးကို ... အဆုံးရောက်တဲ့အထိ ... ဖင်လေးကို ပြန်ကြွပြီး ... ပစ်ထိုင်ပစ်လိုက်တယ် ...
အားကနဲ ကျွန်မလေ နာသွားတယ်ရှင့် ... ဒါပေမယ့် ... အရမ်းကောင်းလွန်းတော့ ... မောင့်ဟာကို အဆုံးထိ ထုတ်လိုက် ... အဆုံးနားရောက်ခါနီးရင် ... သိမ့်ကနဲ ထိုင်ချပစ်လိုက်နဲ့ ... မောင်တောင် ... အိပမ်နေနိုင်တော့ဘူး ... ငေါက်ကနဲ
ထထိုင်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်နဲ့ တူတယ် ... ဟင်း ဟင်း ... ဘယ်ရမလဲရှင် ... ကျွန်မ ... မောင့် ... ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့
ဖိထားပြီး ... ဆက်တိုက် ... ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ... ဒီနေရာမှာ ကျွန်မ တင်ဆိုင်ကြီးတွေက အရမ်းအသုံးဝင်တာပဲရှင် ... ကျွန်မသာ တင်သားသေးသေးလေးဆို ... မောင်အားရပါ့မလား မသိပါဘူး .... အခုတော့ ... မောင့်အပေါ်ကနေ ... သိမ့်ကနဲ
ဆောင့်ဆောင့်ချပစ်လိုက်တာ ... မောင်အရမ်းသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ် ... မောင်ဒု့တ်ကို ညှစ်ထားရင်း ... ပြန်ကြွလိုက် ... စိတ်ကိုလွှတ်ပေးပြီး ... သိမ့်ကနဲ ဆောင့်ချလိုက် ... အောက်က မောင်က ပင့်တင်ပေးချိန်နဲ့ အံကိုက် ... ဒုန်းကနဲ
အဆောင့်ခံရတော့ ... ကျွန်မစိတ်တွေ ... လေထဲ ၀ဲပျံနေပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... ကျွန်မ နာကျင်နေပေမယ့် ... အောက်ကနေ
တိုးဝင်လာတဲ့ မောင်ဒု့တ်ကို ... ယမ်းခါသွားအောင် ... တင်သားဆိုင်တွေကို စကောဝိုင်းလို မွှေပေးလိုက်နဲ့ ကျွန်မ စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ရင်း ... အရည်တွေက ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ အန်ကျလာပါတယ် ... ကျွန်မလေ ... မောင့်ကို
အရမ်းဆောင့်ပေးတော့ ... မောလိုက်တာရှင် ... နည်းနည်းကြာတော့ ... ကျွန်မ မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး ... အားမရှိတော့ဘူးရှင့် ... ................................................................. "မောနေပြီလား ... မရယ်"
"မောတာပေါ့ ... မောင်ရယ် ... လှုပ်တောင် မလှုပ်ချင်တော့ဘူး" မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ လှဲချလိုက်ပြီး ... ကျွန်မလေ ... မောင့်ရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို နားထောင်ကြည့်လိုက်တယ် ... တဒိန်းဒိန်းနဲ့ ... မောင့်ရင်ခုန်သံတွေက အကျယ်ကြီးပဲ ... မောင်လည်း မောနေပြီနဲ့ တူတယ် ... ဟင်း ဟင်း ... ကျွန်မကြောင့် မောင်ရ့င်တွေ
တအားခုန်တယ် ဆိုတာ သိသာပါတယ် ... ကျွန်မ ကျေနပ်သွားတယ် ... မောင့်ကို ချစ်ခွင့်ပေးလိုက်တာကို ... ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး ... ကျေနပ်စွာနဲ့ ... မတွန့်တိုတော့ဘူးကွယ် ...
"မောရင် ... အောက်မှာ ပြန်နေနော် ... မောင် အပေါ်က ချစ်မယ်" "အို ... မောင့် ..." မောင်လေ ... ကျွန်မကို အတင်းဖက်ထားရင်း ... ကိုယ်ကိုလှည့်လိုက်တော့ ... ကျွန်မက မောင့်အောက်ကို ပြန်ရောက်သွားတယ် ... မောင့် ဒုတ်ကြီးက ... ကျွန်မပန်းလေးထဲမှာ ... ၀က်အူရစ်လှည့်လိုက်သလိုပါပဲ ... နာလိုက်တာရှင် ... အပျိုမြှေးလေး ကွဲပြဲပြီး စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတဲ့ အထဲ ... ဒီလိုမျိုး ထိုးမွှေလိုက်တော့ ... နာလိုက်တာရှင် ... နာလွန်းလို့ ကျွန်မ တကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားရင်း ... ကျွန်မ တင်ဆုံကြီးက ... အပေါ်ကို အတင်းကြွပစ်လိုက်ပါတယ် ... "အား ... နာတယ်နော် ... မောင့် ..." မောင်လေ ... ကျွန်မ ဒီလို အော်လေ ... ပိုလုပ်လေပဲ ... သူ့ဒုတ်ကို ... အတင်းဆွဲထုတ်ပြီး ... အတင်းပြန်ထည့်တယ် ... နာကျင်လွန်းလို့ ကျွန်မ ပန်းလေးကို ... အတင်းညှစ်ထားတဲ့ကြားက ... မောင့်ဒုတ်က ... တထစ်ထစ်နဲ့ ပြန်ဝင်လာတယ် ... အောင်မလေး မောင်ရယ် ... နာလိုက်တာနော် ... ဟင့် ... ရက်စက်လိုက်တာ မောင်ရယ် ... ကျွန်မလေ ... မောင့်ကို အတင်းဖက်ထားတော့ ... မောင် အသွင်းအထုတ်လုပ်နေတာတွေကို ... ရပ်လိုက်တယ် ... နာကျင်လွန်းပေမယ့် ...
မောင်ရပ်လိုက်တော့လည်း ... ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ လက်မခံချင်ပါဘူး ... မောင့်ကိုလေ ... ဆက်လုပ်စေချင်ပါတယ် ... မောင် ဘာလုပ်မလို့လဲဟင် ... ကျွန်မလေ ... မောင့်ကို မော့ကြည့်တော့ ... မောင်က ဘေးနားက ... ခေါင်းအံုး တလုံးကို ... ကျွန်မ ဖင်အောက်ထဲ ထည့်လိုက်တယ် ... ကျွန်မဖင်တွေက ... အတင်းထောင်ပေးသလို ဖြစ်သွားတယ်ရှင့် ... ပန်းလေးက
အတင်းကော့ပေးသလို ဖြစ်နေရင်း ... မောင့်ဒုတ်က ... အတွင်းသား နက်နက်ကို ... ပိုထိလာသလို ခံစားရပါတယ် ... သေပြီ မောင်ရေ ... တို့တော့ ... သေပါပြီကွယ် ...
"အား ... မောင်နော် ... ဖြေးဖြေးလုပ်နော် ... ဟင့်" "အရမ်းထိတယ် ... မောင်ရယ် ... အရမ်းနာတယ် ... ဟာာာ .... ဟာာာ .... အူး .... ဟင့် ... ရှီး" ရမက်သံတွေ လျှံထွက်လာအောင် ... မောင်လေ ... အသွင်းအထုတ် ... အထိုးအမြှုပ်လေးတွေ လုပ်ပေးတာ ...
အရမ်းကောင်းတယ်ရှင် ... ကျွန်မကလည်း ကျွန်မပဲရှင် ... ဖင်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးခံထားလို့ ... ကော့ပေးထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ကြားက ... မနေနိုင်တော့ဘူးရှင် ... ခြေဖ၀ါးကို မွေ့ယာပေါ်မှာ အားပြုပြီး ... အတင်းကော့ကော့ပေးနေတယ် ... မောင်ရယ် ... ဘယ်လိုများ ... တို့ကို ချစ်နေတာလဲကွယ် ... ပန်းလေးထဲက ... စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ယားလွန်းလို့ ... မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ် ...
"အို ... အမေ့ ... ဟာာာ .... ဟာာာ" "အရမ်းမကြမ်းနဲ့ ... မောင်ရယ် "
"နာတယ်နော် ... မောင့် .... ဟာာာာာ ... ဟာာာ ... ရှီး" "ဟာာာ ... ဟင့်အင်း ... ဟင့်အင်း ... အဲဒီလို မမွှေနဲ့လေ ... အား .... ရှီး" ချစ်တာကြမ်းလိုက်တာ မောင်ရယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မခါးကို ကိုင်ပြီး ... အတင်း
ချစ်တာကြမ်းလိုက်တာ မောင်ရယ် ... မောင်လေ ... ကျွန်မခါးကို ကိုင်ပြီး ... အတင်း ဆောင့်တာ ... မောင့်ရဲ့
အနီးကပ်ဆောင့်ချက်တွေက ... ကျွန်မ မခံနိုင်တော့ဘူး ... ရုန်းလို့လည်း မရတော့ ... ခေါင်းကိုသာ အတင်းခါရင်း ... မောင့်လက်မောင်းကို ... အတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရတော့ပါတယ်ရှင် ... လုပ်ပါတော့ မောင်ရယ် ... သေအောင်သာ လုပ်လိုက်တော့ ... မောင်နော် ... ခံစားချက်တွေ ရမက်မီးတွေက ... ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေလို့ ... ကျွန်မလေ ... အရမ်းပဲ ငြီးတွားနေမိပါတယ် ... မောင်ရဲ့ မျက်နှာကလည်း နီရဲတွတ်နေတာပဲ ... ကြိုက်ရဲ့လားဟင် ... မောင် ... "ဟာာာ ... ရှီး" ကျွန်မ ... မခံနငိုတော့ဘူး ... ထွက်တော့မယ် ... ထွက်တော့မယ် ... ပန်းလေးထဲက ... တဆစ်ဆစ်နဲ့ ... အတင်းညှစ်ထားရင်း ... တရစ်ပြီး တရစ်တက်လာတဲ့ ... ကာမစိတ်အပြင်းထန်ဆုံးအချိန်ကို ... ဘယ်လိုမျိုးအဆုံးသတ်ရမှာလဲရှင် ... မခံနိုင်တော့ဘူး
မောင့် .... မောင့်ဟာကို ... အတင်းညှစ်ထားရင်း ... ပြွတ်ကနဲ ထွက်သွားပါတယ် ... မိနစ်ဝက်လောက် ကြာချိန်လေး အတွင်းမှာ ... ကျွန်မစိတ်တွေ ... နတ်ပြည်ကို ရောက်သွားသလိုပါပဲ ... ငြိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ ... ထူးကဲတဲ့ ... ကာမအရသာက
ကောင်းလိုက်တာရှင် ... ကောင်းလိုက်တာ ... ကောင်းလွန်းလို့ ... တကိုယ်လုံးလည်း အားမရှိတော့ပါဘူး ... မျက်စိဖွင့်ဖို့တောင် အားမရှိတော့လို့ ... မှေးနေရင်း ... မောင့်ရဲ့ အဆုံးသတ်ဆောင့်ချက်တွေကို ... အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ပြီး ...
မောင်ဒု့တ်ကြီးထဲက ... ပန်းထွက်လာတဲ့ ... အရည်ပူပူတွေကို ... ပန်းလေးထဲက တရစ်ရစ်စပ်ုယူရင်း ... တညလုံး မောင်ချစ်သမျှ ... အလိုလိုက်ရင်း ... မိုးစင်စင်လင်းသွားပါတော့တယ်ရှင် ... ပြီးပါပြီ
inn yar lane
sexy book for all people